အဆိုပါသူရဲဘောကြောင်ခြင်္သေ့ရုံလွန်း Porn အတူ Masturbating ခဲ့သလဲ (2010)
မှတ်ချက် YBOP: ဤသည်မှာယခင်အသုံးပြုသူများယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်မျှော်လင့်မထားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးရေးသားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လူငယ်များအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (SAD) ရှိသူရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်အနေဖြင့်မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အသုံးပြုသည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိပါ၊ အကြောင်းမှာလေ့လာမှုများမရှိပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn သည်ဖြစ်ရပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုများတတ်နိုင်သမျှ; နှင့်မျှလေ့လာမှုမှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းများကိုမေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်မှုပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဆက်လက်အစီရင်ခံကြသည်။ ဤသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုမိုမကြာသေးမီဆောင်းပါး (သိပ္ပံပညာများစွာဖြင့်) porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် porn ငါ၏အလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု / ယုံကြည်မှုပိုမိုဆိုးရွားအောင်သလဲ? - တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ပြီးသည့်နောက်တွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတိုးတက်လာခြင်းအကြောင်းများစွာပါဝင်သည်။
မိမိအ5မိနစ်ကို TED Talk ကိုခုနှစ်တွင်, “ ယောက်ျားများသေဆုံးခြင်း”ကျော်ကြားသောစိတ်ပညာရှင် Phillip Zimbardo က“ နှိုးဆွမှု” (porn, video games) သည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
2019 ၏အဖြစ် လေ့လာမှု ၉၀ ကျော်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ထိုမှတပါး, စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အကြိမ်ကြိမ်ပြခဲ့ကြ အင်တာနက်စွဲ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်တည်မြဲ memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
Tဤနေရာတွင် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်
တစ်ဦးကြောင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တိုက်ဆိုင်မှုငါနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်း၏ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစကားကိုနားထောင်ခဲ့သည်။ ထပ်ခါထပ်ခါတစ်ဘုံပုံစံပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ယေဘုယျအားဖြင့်ယာယီ) ကိုပြန်လည်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်လိုသောဆန္ဒရှိသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်မှု၊ သူတစ်ပါးကိုအခြားသူများကိုကြည့်ရှုနိုင်စွမ်း၊ သူတို့၏ဟာသဉာဏ်ရှိသကဲ့သို့ သူတို့၏“ သူရဲ”၊ သူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အကောင်းမြင်မှု၊ စီစစ်ခြင်း၊ အလားအလာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်များအားဆွဲဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကိုသူတို့သိမြင်ကြသည်။
ယခင်ကပြင်းထန်သောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုခံစားခဲ့ရသူများပင်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်အတွက်နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေရန်ရဲရင့်ခြင်းမရှိကြပါ။ အလုပ်တွဲဖက်များ၊ ပြက္ခဒိန်၊ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း၊ တရားအားထုတ်ရန်အဖွဲ့များ၊ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်လပေါင်းများစွာကြာတတ်သော်လည်းအပြောင်းအလဲသည်အလွန်လျင်မြန်သဖြင့်၎င်းတို့အားအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ (ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခုတည်းကိုသာ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မုန်းတီးမှုသည်၎င်း၏မရှိခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ငါသာအချို့သောသူများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကိုပိုမိုဂရုတစိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မလားဆိုတာကိုမျှသာဖြစ်သည်။
In တစ်ဦးနှောင်ကြိုး Disorder အဖြစ်စွဲဖိလစ်ဂျေ။ ဖလိုရာစ်သည်လူတစ် ဦး အားစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောကုထုံးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုပင်မတွယ်တာနိုင်သည့်အချက်ကိုထောက်ပြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ relapse ကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့မှာအခြားသူများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူသည်အဘယ်ကြောင့်စစ်မှန်သောဆက်နွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်မိမိ၏မလှူဒါန်းမှုကိုဖြေရှင်းရန်တာ ၀ န်ယူရမလဲ။ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နော်မန်းဒိုဂျင်ကဒီနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းသောအပိုင်စီးမှုနှင့်ပြင်းထန်သော dopamine များလှုံ့ဆော်မှုသည်လူမှုဆက်ဆံရေးများအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်မြှုပ်နှံမည့်“ ဦး နှောက်အိမ်ခြံမြေ” ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အကြံပြုသည်။ (ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, p ။ (၁၀၉) အမှန်တကယ်ရှိသူများသည်အကြိုးနည်းပါးသည်။ လူများအတုများသည် ပို၍ ဆွဲဆောင်အားကောင်းလာသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရွယ်အစား မ ကိစ္စ, လင်းကြောင်းဦးနှောက်၏အမည်ရ, ပမာဏ။ အဆိုပါ compulsive အပြုအမူခြားက၎င်း၏ပုံမှန်ဦးစားပေး restore ဖို့ဦးနှောက်လွှတ်ပေးခြင်း။
စိတ်ဝင်စားစရာဥပမာ-မကြာခဏစိုးရိမ်ခံစားရဒါမှမဟုတ်အချိန်၏ကျန်စိတ်ကျရောဂါအဘို့အဘယ်သူ၏အလေ့အထ Over-ဆွမြင့်မားသော dopamine-မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်အတူမိမိတို့အကျိုးကို circuitry ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်စေလူများ, ။ ဒီအမြင့်အကြား (ကြောင့် D2 receptors အတွက်ကျဆင်းဖို့ဒါမှမဟုတ် dopamine မှအနိမ့် sensitivity ကို) သညျ့အနိမ့် dopamine ဖို့အကြီးအကျယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများသကြားပြပွဲဆိုင်းဘုတ်များအပေါ် bingeing ခဲ့ကြကြောင်းကြွက် (dopamine လျော့နည်းသွား) ။ ထိုအပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာခြီးမွှောကျ dopamine ထိတွေ့ကြွက်အကြာတွင်တူသောပြုမူ သူတို့စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ကြ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ တဦးတည်းစိုးရိမ်သို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ, လူမှုရေးအနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အသိပ်နဲ့တူခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြသ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန် သူနဲ့ဆက်စပ်နေသည် အနိမ့် dopamine or sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အကြား link ကိုအကြောင်းကိုဒီလေ့လာမှုကိုလည်းတွေ့မြင် dopamine မတည်ငြိမ်မှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်.
Dopamine လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်း surges နှင့်အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ တချို့လူတွေကဒါမကြာခဏမိမိတို့အကျိုးကို circuitry နိုင်ခြင်းကြောင်း masturbate Do homeostasis မှပြန်လာ orgasms အကြား? သူတို့သည်နာတာရှည် dopamine (သို့မဟုတ် dopamine ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသော) ခံစားနေရသည် - လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကြိမ်နှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းသောဘိုးဘေးများနှင့်အနည်းငယ်သာဆင်တူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် (ကြည့်ရန်) လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ).
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမပေးလျှင်, မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်ဆက်တချို့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine နဲ့ dopamine receptors အတွက်ကျဆင်းရန်ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောအပြုအမူစှဲအပါအဝင်အားလုံးစှဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း နှင့် အင်တာနက်ကဂိမ်းကစားခြင်းdopamine အချက်ပြမှုကိုတိုင်းတာ။ ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ မင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲစွဲလမ်းမှုရှိရင်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် dopamine အချက်ပြမှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ (ကြည့်ပါ porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် မူးယစ်အပြုအမူ: Dopamine ၏ 300 လိင်အင်္ဂါ = တစ်လော အဆိုပါယန္တရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ )
ဒီသုံးသပ်: လေ့လာရေးနှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတစ်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကိုပြသ dopamine အတွက်ကျဆင်းမှု (D2) receptors, desensitization ၏အဓိကရှုထောင့်ဖြစ်၏။
ပထမဆုံးမေးခွန်း: လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လက်အောက်ခံသတ္တဝါများအကြားအဓိကဇီဝဗေဒခြားနားချက်တစ်ခုကားအဘယ်နည်း။ ဖြေ။ dopamine D2 receptors ၏အဆင့်မြင့်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသော D2 receptor များဖြင့်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစားထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် D2 receptor များတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယမေးခွန်း: ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါအကျိုးကျေးဇူးများ (ယုံကြည်မှု၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းမှု) အမျိုးသားများခံစားရနိုင်သလား D2 receptor များတိုးပွားလာသည့် dopamine နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါသလား။ (ဒါသေချာပါတယ် မဟုတ်အသွေးတော် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်။)
သံသယရှိစရာမလိုဘဲအချို့သောသုံးစွဲသူများသည်နာတာရှည်နိမ့်သော dopamine သို့မဟုတ် dopamine receptors များနှင့်စတင်ရန်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည် porn / masturbation ကိုလျှော့ချသည့်အခါအလားအလာများတိုးတက်လာသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်၊ dopamine အဆင့်ဆင့်။
ဦး နှောက်သည် dopamine နှင့်ထိတွေ့မှုနည်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်“ မိတ်ဆွေအားတွေ့ရခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းကိုဖြစ်စေသောသိလိုစိတ်” ကဲ့သို့သော“ သဘာဝအားဖြည့်ဆေးများကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။” —Nora Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးဒါရိုက်တာ
hardcore, အစဉ်အဆက်-ဝတ္ထုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖြစ်ပါသည် တန်ခိုးတော်ဆွဲဆောင်မှု- အက်ကြောင်းနှင့် Krispy Kreme ဒိုးနက်များနှင့်အတူတူပင်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားလှုံ့ဆော်မှုသည်လူသားတို့၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ၏ ဦး နှောက်နှင့်ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်နေသည်။ သို့သျောလညျးရှေး ဦး limbic စနစ်ကသူတို့ကို "တန်ဖိုးရှိသော" အရာများအတွက်သူတို့ကိုအမှားများကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရင်တောင်သူတို့ကိုများစွာသောနှင့်ပိုပြီးရှာဖွေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်း Hangover နှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ.
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကဲ့သို့ပင်“ အလွန်အကျွံ” သည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်အချို့သူများအတွက်၊ အင်တာနက် porn နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်၏အားနည်းချက်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွလိုက်ရှာ။ compulsive, သတိရ, အကြိုးဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်း၏လမ်းရဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုတိုမှာ, မျှမျှတတတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများယေဘုယျအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါဟာလူမှုရေးအရပျမ်းမျှနိမ့်ကျတယ်လို့အမြဲတမ်းလက်ခံခဲ့တယ်။ နှစ်ပတ်အကြာမှာအော်ဂဇင်မရှိဘဲနဲ့၊ ကျွန်တော့်အသံကပိုကျယ်လာပြီးပိုပြီးရယ်လာတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတာကဟာသပြက်လုံးတွေမရပ်တန့်နိုင်အောင်လူတွေနဲ့စကားပြောရတာလွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသွားတယ်။ အခုငါ chatty တစ်ခုပါ။ ဒါဟာလေ့ကျင့်ဖို့အရာတစ်ခုခုပါပဲ။
ငါ ၂၅ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ porn ကို ၁၄ နှစ်ကြာအသုံးပြုခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိတ်ပင်ထားသည့်အစိုးရအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ရှိနေသောကြောင့် ၂ နှစ်တာကာလကိုကျွန်ုပ်မကြည့်နိုင်ခဲ့ပါ။ အဲဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကဗျာ၊ သီချင်းတွေ၊ ပုံပြင်တွေကိုရေးသားခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းလူတိုင်းနှင့်စကားပြောသောကြောင့်စိတ်ဝိညာဉ်မှဝေးဝေးရှောင်သွားသည်မဟုတ်။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါအင်တာနက်၏အဝတ်အချည်းစည်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာနေခဲ့ရသည်။ နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ငါလူကန်လန်ဖြစ်လာတယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေးဝေးနေ။ , ငါရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အများဆုံးအချိန်စိတ်ဓာတ်ကျ။ ဘယ်ကငါဝေးကနေခဲ့ပုံနှင့်အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ“ ထုတ်ပစ်လိုက်မယ်” ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆက်၍ ပြောသော်လည်း၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်မည်နည်း။ နောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ငါဒီလိုမသုံးချင်ဘူး
ကျွန်ုပ်၏ကုထုံးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဆေးများကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်ကြောင်းကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ အဲဒီအစားစိတ်ဓာတ်ကျမှုအောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ငါ porn ကိုရပ်တန့်သောအခါ, ငါပထမ ဦး ဆုံးပိုဆိုးသလိုခံစားရတယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည် ၇ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားမိသည်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်တွေအပြင်စိတ်ဓာတ်ကျမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အလွန်ပျံ့နှံ့နေရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များကိုခွဲထုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝရိုးသားစွာထားခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။
လူတွေကငါ့ကိုဘာတွေပြောင်းလဲပစ်လဲဆိုတာငါ့ကိုမေးကြတယ်။ အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးများနှင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါကမျှ ပို၍ ယုံကြည်မှုမရှိ၊ (ထိုအခါငါတကယ်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုယခုပင်ခံယူနေပြီဖြစ်သည်။ ) လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစိုးရိမ်မှုများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ [Read ပိုပြီးယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများ.]
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်များသည်အခြားသူများနှင့်လူနေမှုဘ ၀ တွင်နေထိုင်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော open-circuit circuits များဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ငါတို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထိန်းညှိရန်ဇီဝဗေဒအရမဖြစ်နိုင်ပါ။
Introverts နှင့်မွေးကင်းစအနေနှင့်ကျန်းမာရေးနှောင်ကြိုးကိုမဖွံ့ဖြိုးသောသူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အထီးကျန်ခြင်းကသူတို့ကိုအဆင်မပြေ။ မကျေနပ်သောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုထိန်းချုပ်စေသည်။ ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုမှလွတ်မြောက်ရန် (သို့မဟုတ်အခြားလှုံ့ဆော်မှုများ) သည်လူမှုရေးအရရရှိသောကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး သည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြောခဲ့သည်မှာ -
လူမှုရေးအထီးကျန်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အားဖြည့်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆိုလိုသည်၊ ယင်းကမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှင့်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေသည်၊ ၎င်းသည်လူမှုရေးကိုပိုမိုစိုးရိမ်စေသည်။
တစ်ဦးချင်းစီနှင့် Self-မှီခို၏အနောက်စံပြပိုမိုနီးကပ်စွာလူမှုရေးဆက်ဆံမှု၏ဆုလာဘ်စိုက်ပျိုး၏အစား Self-လုံလောက်သောဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းမှုအားပေးထားသည်။ Flores ထောက်ပြအဖြစ်, အခြားသူများအားဖြင့်ထင်ဟပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုလိုအပ်မှားယွင်းမှီခိုနှင့်ငတ်မွတ်သောတံဆိပ်ကပ်နေသည်။ အမှန်တရားအတွက်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြရာဖြစ်တယ်။
လူမျိုးစုနှင့်တွဲဆက်သောမျောက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအတွက်အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ မကြာခဏညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုသည်ဤအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုအစားထိုးလိုသောဆန္ဒနှင့်အော်ဂဇင်ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ porn သည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေပါ။ ညစ်ညမ်းသော / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မဖြစ်မနေဖြစ်လာသည့်အခါအနာဂါတ်တွင်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးကိုအကန့်အသတ်မရှိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် ဦး နှောက်၊ ၎င်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်၎င်းအချက်ပြနေသည့်အချက်ပြများကိုပြုပြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့အဘို့, ဤအပြောင်းအလဲများအားနည်းချက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သတင်းကောင်းမှာညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလျှော့ချသည့်အခါများစွာသောသူတို့သည်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားနေရတဲ့ (ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကုထုံးပညာရှင်) တွေဆီကကျွန်တော်ကြားရတာအရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုအဆိုပါသူရဲဘောကြောင်ခြင်္သေ့ရုံလွန်း Porn အတူ Masturbating ခဲ့သလဲ (2010)"
06 မှာ 23 / 2011 / 7: 20 ညနေ
ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသော“ စိတ်ပညာယနေ့” ဟူသောမှတ်ချက်
ပြီးခဲ့သည့်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးနောက်ငါ post တင်ရန်စိတ်လိုခဲ့သည်။ ယောက်ျားများစွာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအလေ့အထဖြစ်နိုင်ပြီးမည်သူမဆိုအားပြင်းထန်သောတုန့်ပြန်မှုရှိသည်ဟုထင်ရပြီးတစ်စုံတစ် ဦး အားခိုင်မာသောကက်သလစ်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်သည် (ထိုဆောင်းပါး၌ဤထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြရန်ဘာမှမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်)
ငါအသက် ၁၁ နှစ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေစပြုလာတယ်၊ လောလောဆယ်ငါအသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီ။ အသက် ၁၁ နှစ်မှယခုအချိန်အထိတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်ကိုမမှတ်မိသော်လည်း၊ ငါအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဆိုးရွားဆုံးနှစ်တွေပေါ့။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ငါဟာ ၁၁ တန်းမတိုင်ခင်မှာအမြဲထွက်သွားခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ၊ အမြဲတမ်းအတန်းထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးကလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ၁၁ တန်းကျောင်းသားဘ ၀ မှာလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာတယ်။ ငါအရာအားလုံးနှင့်လူတိုင်းကိုရှောင်ကြဉ်။ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး၊ အထက်တန်းကျောင်းပြီးရင်တောင်ငါလည်းအဲဒီလိုခံစားခဲ့ရတုန်းပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤမျှကာလပတ်လုံးမှီခိုအားထားခဲ့ရသည့်“ သဘာဝစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာ” သည်တရားခံဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
ငါနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိရမည်ဟုထင်, ဒါကြောင့်သေချာကြောင်းခံစားခဲ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါတစ်နေ့လုံးငြီးငွေ့ခဲ့တယ်၊ အမြဲတမ်းခါးသီးတဲ့၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမပေါင်းသင်းဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအလွန်ဆိုးရွားလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်မိသားစုမိတ်ဆုံပွဲများကိုမျှမသွားလိုသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အစ်မကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲကိုလည်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်အိပ်ယာထထပြီးကွန်ပျူတာကိုသွားပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာစိတ်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးသူတစ်ယောက်ကိုနေ့တိုင်းလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါတနေ့တကြိမ်ပျမ်းမျှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မည်မျှဆိုးရွားသည်ကို မူတည်၍ တခါတရံတွင်ပိုမိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုမည်သည့်အခါမျှရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ငါရော့ခ်အောက်ခြေကိုရောက်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုဒီလိုခံစားမိစေတယ်။ ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အစားအစာစားတာ၊ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့အားအရာတစျခုဖွစျခဲ့သလဲ ကောင်းပြီကရိုးသားစွာရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပြtheနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိဂုံးချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါရှာပြီးဒီဆောင်းပါးကိုရှာခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတစ်ပတ်ခွဲခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ငါဟာအမြဲတမ်းမြူနေသလိုခံစားနေရမယ့်အစားငါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ထားရှိသူ၊ ပိုပြီးလူမှုရေး၊ ယုံကြည်မှုရှိသူ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအခြားသူများကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောအသိပညာဗဟုသုတအချို့ကြောင့်စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်အချို့ကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မင်းဟာအားအင်ပြည့်ဝသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ မင်းကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုဆက်ပြီးအသက်မရှင်စေအောင်အတားအဆီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
07 မှာ 27 / 2011 / 5: 27 နံနက်
ဂယ်ရီ Wilson က says:
07 မှာ 27 / 2011 / 3: 59 ညနေ
ယောက်ျားလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ မင်းရဲ့မျိုးဆက် (မင်းကမင်းဟာနုပျိုသေးတယ်လို့ထင်တယ်) ဒီရှုပ်ထွေးမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အဖြေမရှိပါဘူး ညစ်ညမ်းမှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူများသည်အခြားသူများကိုအသိဥာဏ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်
သူငယ်ချင်းများနှင့် porn များသည်မကြာသေးမီကဆွေးနွေးခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဖိုရမ်၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည် - http://www.reuniting.info/node/7142
ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသောသိပ္ပံပညာရှင်အချို့သည်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုသူ ဦး နှောက်အပေါ်သုတေသနပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်“ ကျွမ်းကျင်သူများ” ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း၊ အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားအာမခံသည်။ သာမန်မှတ်စုများမှာမည်သည့်ညစ်ညမ်းမှု၊
10 မှာ 31 / 2011 / 4: 42 နံနက်
ငါသညျဤအထဲကအတည်ပြုစုံစမ်း။ ငါကောင်းတဲ့ကောင်းသောရှာဖွေနေကောင်လေးပေါ့ငါမူကားအကြီးအစိတ်မိန်းကလေးများအဘို့အဇီဇာတာရဲ့တကယ်ဇီဇာဆိုကြပါစို့နှင့်အစားချစ်စရာနဲ့စပ်လျဉ်းထိတွေ့ဆက်ဆံပေမယ့်ဒါစိတ်မိန်းကလေးတွေနဲ့တူငါမယ့်အစားတဦးတည်း nighters နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ဘို့ porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်မဟုတ် အဲဒီမှာရှိ။ အစဉ်မပြတ်ငါမဟုတ်ဒါကြောင့်လွယ်ကူမှာလူမှုရေးအရသူငယ်ချင်းငါ့အစက်ဝိုင်းပြင်ပဝေးကွာသောမျိုးလူကြိုက်များခဲ့ကြပြီ။ အဲဒါကိုသေချာ abstinence ၏2လအကြာငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဒီလှိုက်လှဲမှုမရှိ၏တရားခံဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောပြနိုင်, ငါ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြောင်းလဲသော်လည်း။
သို့သော်ဤတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအားလုံးကိုယုတ္တိချစ်ခြင်းမေတ္တာကကွာဖြုန်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုယ်အားနည်းခြင်းမရှိဘဲ, ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲသင်၏အသက်တာကို-force ဖျန်၏လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူများသည်မျှသာ orgasm အစားကသဘာဝကျကျလုပ်နိုင်ကဲ့သို့သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤစွမ်းအင်ကိုပြောင်းလဲခွင့်များထိခိုက်ကြသည်။
ဒီတော့2လအတွင်းအကြှနျုပျ၏တီထွင်ဖန်တီးမှု, အာရုံ, ခွန်အား willpower, ခံစားချက်, ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားအမြတ်ပြီးနောက်အားလုံးအလွန်ကောင်းနေတယ်။ မိန်းကလေးများဒါကြောင့်ရယ်စရာနှင့်အံ့သြဖွယ်င်ငါ့ထံသို့ဆွဲဆောင်နေကြသည်; သငျသညျအရမ်းရယ်ရတယ်ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ရှိခဲ့ပါတီမြင်ကြပြီသငျ့သညျ။ ငါသညျလညျးကနေရှောင်သောအခါအသင်ရင်ခုန်စရာကတော့ဘူးသင့်ရဲ့သေနတ်ချမယ့်ရက်ရော၏ဤအသိသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့နက်ရှိုင်းစွာတိုးချဲ့ဖြစ်ချင်တယ်, မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်လိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သွေးဆောင်ဘယ်လိုသတိပြုမိသည်။
11 မှာ 27 / 2011 / 11: 55 ညနေ
ငါငါ ejaculated သည်အထိအိပ်ရာအပေါ်မှာငါ့လိင်တံကြိတ်ခြင်းဖြင့်နေ့စဉ် masturbating ခဲ့သည် 8 ခဲ့အချိန်အားဖြင့် 10 ၏အသက်အရွယ်မှာခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်စတင်ခဲ့ကြောင်းသတိရပါ။ အဆိုပါပျော့ core ကိုညစ်ညမ်းအပေါ်ရောက်လာမယ်လို့တဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့မိဘတွေကဒါ CineMax ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, channel ကိုအလျင်အမြန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ငါနီးပါးညစဉ်ညတိုင်းလိင်၏အသံမှ masturbating သတိရပါ။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောနေ့ကစဉ်းစားအားလုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့, ငါကျောင်းမှာနာမည်ကြီးလေးတွေမဟုတ်ခဲ့, ငါ့အဆင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့ကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါပဲသူတို့ကိုနက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်းသင်ျဂွိုဟျ, ကောင်းစွာအကြှနျုပျ၏စစ်မှန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖုံးကွယ်နိုင်ကြပါပြီ, ငါမကြိုက်ဘူးမည်သူမဆိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မသင်ယူနိုင်အောင်ငါအစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံနိုင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုအမြိုးသမီးမြားရရနျအတှကျလှယျကူခဲ့စဉ်မပြတ်ငါငါအေးမြခဲ့တူသောငါသူတို့သည်ငါ၏ဘိလိယက်ကျွမ်းကျင်မှုကြိုက်တယ်မှန်း, ပြုမူ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုငါစကားပြောသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါရက်စွဲများကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဤမိန်းကလေးများကိုစိတ်ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်များအဖြစ်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ငါမှာလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုငါသဘောကျခဲ့တယ်လို့အိပ်ရာထဲမှာရနိုင်ရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် သူတို့နှင့်အတူနှင့်လာမည့်တ ဦး တည်းအပေါ်ကိုရွှေ့။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေပါစေငါအမြဲအစဉ်မပြတ်ငါ porn watched masturbated တဲ့ခံခဲ့ရသည်ဘယ်လောက်လိင်, အဲဒီမှာအမြဲရှိကြ၏။ ငါကငါ့အဘို့အသက်တာ၏အသက်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, ကလိုနေတယ်။ ငါကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတွေရနိုင်ရန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့မတိုင်မီငါကလည်းလိုပဲ, သူတို့ကကျနော်ပုံမှန်ကောင်လေး, သူတို့ကအစဉ်အဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအအေးဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ နက်ရှိုင်းသောဆင်းငါ mooch တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုဘောလုံးကိုခဲ့နာကျင်ခဲ့ပါတယ်အထဲမှာကျွန်မစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပါတယ်, ထိုသို့ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေတစ်ခုတည်းသောအရာကြီးနဲ့တူငါလုပ်ပေးချင်ခဲ့တယ်အားလုံးချွတ် Jack ခဲ့ပါတယ်, ဒါသလိုပဲ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုအဆုံးမဲ့သံသရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါကွန်ပျူတာပေါ်မှာခုန်, ငါအိမ်ပြန်လာလိမ့်မယ်, တခါတရံတွင်ငါအလုပ်မှာပုန်းကွယ်ရာအရပ်ရှာဖွေ masturbate မယ်လို့ကျွန်မအလုပ်သို့သွားပါလိမ့်မယ်, နံနက်ယံ၌ထနိုးနှင့် masturbate သည်ရေချိုးခန်းအတွင်းရ masturbate, lotion နှင့်ငါ့ဝှေးပွတ်သပ်မယ်လို့ , porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန် masturbate, ငါရေချိုးညဉ့်အဘို့အထွက် သွား. , အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေ, လိင်ရှိသည်, အိမ်ပြန်နှင့်ငါလိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာများ၏ပုံရိပ်များနှင့်အတူပျင်းတယ်ပြီးနောက်ကိုယ့်အတူလိင်ခဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းကို masturbate မယ်လို့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် masturbate ။ ဤသည်သံသရာအများအပြားနှစ်ပေါင်းများစွာသွားလေ၏။ ငါလိုချင်မည်သည့်မိန်းကလေးတစ်ဦး get နိုင်မယ့် Rock STAR ခဲ့ငါ့ကိုလှည့်ပတ်သည်လူများတို့အားငါသူတို့ဖြစ်ချင်အရာအားလုံးကြီးအစွန်းပေါ်တွင်ဘဝအသက်ရှင်။ , ငါနာကျင်သောကြောင့်ငါနောက်ဆုံးတော့ dopamine.I အပေါ်ချိတ်ဆက်ခဲ့အလုအယက်, လက်ထပ်တနေ့ဆင်းအခြေချ, ဒါပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါသည် ချစ်. ငါ junkie ကြီးအစွန်းပေါ်တွင်ဘဝနေထိုင်ခဲ့! ငါရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး ၏ဘဝကိုမရှင်သန်နိုင်တော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်အလျင်စလိုမသွားနိုင်တော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင် dopamine ပမာဏကိုထိန်းထားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ငါမှားသွားတယ်အရာအားလုံးကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ဇနီးအပြစ်တင်, အသေခံရန်လိုငါနိုင်အောင်ငါ masturbate နိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ငါ Tranny porn သို့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံရှာသလိုခံစားရတယ်, ငါသည်အပင်ငါ့ကိုပေါ်မှာသိုင်းကြိုး-on ကိုသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော့်ဇနီးကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါဒါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သူလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမတကယ်သူအဘို့အကြှနျုပျကိုမွငျမှရတယ်, အဲဒီအေးမြနောက်ကွယ်မှ, ချိုမြိန်, အထွက်ကောင်လေးတစ်ဦးနဂါးအသက်ရှင်သူနောက်ကွယ်မှကြည့်ဖို့တယ်။ ငါဇနီးကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သူမနဲ့လက်မထပ်ခဲ့ရင်သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကကျွန်ုပ်၌ရှိသောမည်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမဆိုသေစေခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုအိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မကူညီခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမအားကလေးတွေနှင့်အတူမကူညီခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်ပါ၊ ငါကငါနင့်ကိုငါကျိန်ဆဲတော့မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုမပေးခဲ့ဘူး၊ သူမ shit မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ငါသူ့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်အောင်ငါပြောမယ်၊ အိပ်ခဲ့တယ် ငါစေသောအဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုသူမ၏ဒီတော့သူမကကျွန်မလိုချင်သမျှအပေါက်ထဲမှာလိုခငျြအခါတိုင်းကျွန်မသူမကိုကနေယူနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုငါ့ကိုအကြောင်းမရှိများအတွက်စုံလင်ခြင်းရှိ၏ထားတဲ့ဆေးပြားအိပ်ပျော်နေသောလှည့်အိပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူ့ကိုငါပြုတယ်ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ iPod ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အမာခံ porn ဖို့အများကြီးနာရီ masturbated ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကသူမမကြာသေးခင်ကထွက်ခွာနေပြီလို့ပြောတယ်။ သူမဟာကျွန်မကိုအရမ်းနာကျင်စေတယ်၊ ​​သူမကိုအရမ်းပျက်စီးစေနိုင်ခဲ့တယ်၊ သူမသေဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာသူမသိခဲ့ဘူး၊ ငါသူမကိုတန်ဖိုးမရှိသူလို့ခံစားခဲ့ရတယ် နောက်တဖန်လူသားတစ် ဦး သည်သူမထိုတွင်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ငါသုတ်သင်နိုင်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်မတို့ကလိင်ဆက်ဆံမယ်၊ ငါစိုက်ထူတာကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ဒါကသူမကိုတကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ သူမနံရံတွေပျောက်သွားသလိုခံစားရတယ်။ ငါပြောင်းလဲမယ်လို့သူ့ကိုကတိပေးခဲ့တယ်၊ (ဒီအကြောင်းသူကအဓိကပြောထားတာပါ) ဒါကြောင့်သူမပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့သူ့ကိုပြောမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့တညဉ့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကယ့်ကိုဆိုးရွားခဲ့မကောင်းတဲ့ခဲ့ !! ငါ့လက်ကိုလှုပ်ခါရန်စတင်, ငါ့နဖူးချွေးမှစတင်ခဲ့ခြင်း, နောက်ဆုံးမှာငါတက်ခြင်းသို့သွားလေ၏, ပြီးတော့ငါငိုတော့တာပဲ။ ငါနောက်ဆုံးတော့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့ဘဝတစျခုလုံး shaped ခဲ့ကွောငျးသဘောပေါက်ခဲ့, ငါသည်ငါ၏သားသမီး, ငါ့ဇနီး၏မျက်နှာကို ထောက်. ငါရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းသိသည်။ ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့လူကြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးကအစစ်အမှန်မခံစားရတော့ဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါဘဝကိုပိုပြီးလည်းမရှိနဲ့တူပျောက်ဆုံးနေတစ်ခုခုလည်းမရှိသကဲ့သို့, အစဉ်မပြတ်ငါခံစားခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် YouTube သို့ပင်ဂြိုလ်သားများနှင့်အစိုးရပူးပေါင်းကြံစည်မှုများရှာဖွေနေသည်။ လပေါ်၌နေထိုင်သောလူများပျောက်ဆုံးနေသောအရာတစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပေါက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာကကျွန်ုပ်သည် doping ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌စွဲလမ်းမှုရှိသည်ကိုမသိခဲ့ပါ၊ ပျောက်ဆုံးနေသောပဟေpieceိအပိုင်းအစသည်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးကြည့်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ ငါ, ငါသညျငါ့အသက်တာ၌ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကိုထိခိုက်စေကြပြီနေမကောင်းသဘောပေါက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသည်ငါ့ hard drive ကိုအနေဖြင့်အပေါငျးတို့သ porn ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြပြီးနောက်တဖန် masturbate ဖို့မကတိပြုခဲ့ကြသည်။
11 မှာ 28 / 2011 / 5: 15 နံနက်
သင့်ဇနီး၏ဗီဇကောင်းများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည်။ သင်၏စွဲစွဲလမ်းမှုမြင့်တက်လာရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းဘာသိလဲ ငါသူမလည်းသင်နှင့်ပတ်သက်။ မှန်ခဲ့သည်အလောင်းအစား။ ငါသည်သင်တို့ကို * စွဲနောက်ကွယ်မှ ... ထိုအံ့သြဖွယ်ကောင်လေးဖြစ်ကြသည်အလောင်းအစား။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အပြည့်စုံဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုရယူပါ။ အထောက်အကူပြုစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးခဲ့သလား။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
* ကြီးတွေပွေ့ဖက် *
11 မှာ 28 / 2011 / 4: 06 ညနေ
12 မှာ 12 / 2011 / 12: 51 နံနက်
အခြား site မှ။
ညစ်ညမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိပြီး၎င်းကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်တော့မည်မဟုတ်သည့်အခြားယောက်ျားများစွာရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဖိုရမ်ဟာချိုသာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ထဲကဒီနေရာကိုရောက်နေကြမှာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်မရဲ့လက်ရှိရှုမြင်ချက်ကိုဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမထားခဲ့ပါဘူး။
ငါမျောက်ကိုရိုက်ခဲ့တာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ။ (ငါကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေသည့် youtube-esque porn sites အကြောင်းသိသောအခါ!) ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလေးစားမှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိမြင်ခဲ့တယ်။ ဆန့်ကျင်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ လူပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ပိုမိုအောင်မြင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်သိသောအအောင်မြင်ဆုံးယောက်ျားများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ခဲ့ကြပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ကောင်းနှစ် ဦး စလုံး။
12 မှာ 29 / 2011 / 7: 08 ညနေ
ငါသည်ဤစွဲလမ်း၏အထွဋ်မှာတုန်းကအစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဦးတည်းအိမ်ကဆက်နေရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူသွားလာခြင်းသွားကြဖို့တံခါးကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်ရဖို့ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်အများကြီးယူလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာတယ်ပြီးတာနဲ့အစဉ်မပြတ်ငါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအိမ်ပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။
သို့သော်ယခုငါလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏အလားအလာကိုပျော်စရာနဲ့လုပ်နေတာတန်ဖိုးရှိပုံပေါ်ကြောင်းရှာပါ။ ငါကအခြားလူတို့နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဒီစွဲရိုက်နှက်ဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ပါလျှင်မပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအချိန်တစ်ရီစရာနည်းနည်းစွန့်ပစ်နဲ့တူပုံပေါ်စေသည်ပွညျ့စုံနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏ဤအသိဖြင့်သင်တို့ကိုဖြည်။
03 မှာ 21 / 2012 / 4: 30 နံနက်
reddit.com ပေါ်ချည် - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်
ကိုယ့်ယခုအချိန်တွင်ကျပန်း Epiphany သို့ရောက်ကြ၏။ ငါ 12-14 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်အဟောင်း / တုန်းကငါ့အစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာများကိုပြန်စဉ်းစား PMO နှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။
တခြားအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူတက်ဆင်းသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်အပြီးငါကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါသည်မျှ FAP စတင်ခဲ့သည်။
05 မှာ 01 / 2012 / 5: 57 ညနေ
Reddit.com NoFap ထံမှတစ်ဦးကချည်
မမျှော်လင့်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက် 22 ရက်။
ကျနော်တို့မ faps တွေ့ကြုံခံစားရန်မျှော်လင့်ထားအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏စွမ်းအင်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြီးသားသူတို့နှစ်များတွင်ပါပြီထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
အခုတော့ကစားသမားအတွက် - လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်လောက်ကငါဟာစကားနည်းနည်းလေးပြောခဲ့တယ်။ ဒါဟာဘာမှမထူးပေမယ့်ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်ဖို့လုံလောက်နေတုန်းပဲ။ ငါတစ်ယောက်ယောက်နှင့်စကားပြောသောအခါစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လာပြီးသင်စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့စကားလုံးများလည်းမမှန်တော့ပါ။
ငါယခုတစ်ပါတ်ထစ်ကြပြီမဟုတ်။ နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ငါအခုစကားပြောတဲ့အခါငါယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ ဒါဟာသေးငယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့ဒါဟာကြီးမားတယ်။ ငါဝမ်းသာပီတိခံစားရတယ်
Edit ကို: ဒီကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏။ ငါတို့တွေအများကြီးမှာတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိပုံရတယ်၊ ငါတို့ဒီမှာတစ်ခုခုရှိမယ်ထင်တယ်။ အချက်အလက်နှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
05 မှာ 22 / 2012 / 9: 26 ညနေ
reddit မှ - NoFap
NoFap ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီနဲ့ကျွန်မပြန်ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် fapping မှ fapping သွားဖို့ငြင်းဆန်ငါကြင်နာကြောက်တယ်တဲ့ faptacular လမျးခရီး၌ငါ၏ဝီလီကိုထိဖို့ဖြစ်၏။ ငါမကြာသေးမီက Ketogenic အစားအသောက်များတွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်နေ့ 100 အပေါ်ငါ့မိတ်ဆွေကသူ့ကို P90X ကောင်းတစ်ခု torrent ကိုရှာဖွေငါ့ကိုမေးတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူနေ့တိုင်းကြောင်းလုပ်နေတာစတင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုပြောပြရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ငါတကယ်ငါသူတို့ရှိလိမ့်မည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျသောအခါသူတို့အား ABS ဒါမယ့်ရချင်တယ်။ porn စွဲနီးပါး, ငါကအကြောင်းအထဲကရှာတွေ့နိုင်အောင်ဝမျးသာငါ့အသက်ကိုပျက်စီး။ ငါကစေလူမှုတော့ပူပန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်း ED ခဲ့ငါလူမှုရေးရသေ့ကြောင့်, ငါနံနက်သစ်သားတယ် NoFap သို့စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်တိုင်အောင်, သတိပြုမိခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးစိတ်ကို fuck ဆိုတဲ့ကြင်နာခဲ့သည်။ ဒါဟာငါသည်သန့်ရှင်းသော shit ကဲ့သို့ဖြစ်၏အုတ်တစည်းကဲ့သို့ငါ့ကိုထိသွားတယ်! နောက်ဆုံးသောကာလငါသည်ဤသည့်အခါရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့သလဲ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အသက်ကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ငါမိန်းကလေးတန်ချိန်အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင့်ရတဲ့အထဲကငါမသော်လည်း, ငါအလိုရှိကြသည်တွင်ဘာပဲရတဲ့ငါ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြ၏။ ငါ့စုံတွဲတစ်တွဲအမှုအရာကို fix ဖို့လိုအပ်အလေးချိန်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာလာပြီကြောင်းလုပ်နေတာစတင်ခင်မှာ။ ကြောင်းပြုသည့်အခါကျွန်မအားကြီးသောထှကျလာပါ၏ အဘယ်သူမျှမကမိန်းကလေးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်😉
05 မှာ 26 / 2012 / 6: 20 ညနေ
LINK - မိမိအရဲစွမ်းသတ္တိ (115 နေ့ရက်များ) တွေ့ရှိခဲ့သောသူရဲဘောကြောင်သောခွင်ျသေ့
မင်္ဂလာပါယောက်ျားများ။ ဒီတုံးတိုနေစေဖို့ငါစတုတ္ထတန်း (အဲဒီအချိန်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ) မှာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစတင်ကြည့်ပြီး getco နဲ့ချိတ်ထားတယ်။ ငါ့ရဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပိုမိုဆိုးရွားလာတယ်၊ ဘာကြောင့်ငါမိန်းကလေးရရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ငါအရမ်းရှက်ရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်နေရတာလဲ၊ ငါ့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှမကြိုက်ဘူးလို့ငါတွေးမိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ဤကိစ္စများကြောင့်အလေးအနက်စဉ်းစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းအချို့ကို googling ပြီးနောက် YBOP site ကိုမတွေ့ရှိမှီတိုင်အောင်၎င်းကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ HOCD မွေးမြူသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူ) ။ ငါကဒါဟာ porn ဖြစ်ခဲ့သည်နိဂုံးသို့ရောက်လာ။ ငါ porn ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မစ်ရှင်အသစ်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၁၅ ရက်အကြာမှာငါမုသာမသုံးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ချည်နှောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှာဖွေဖို့စဉ်းစားတာဟာအမြဲတမ်းပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမသိရင်ငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ နောက်တစ်နေ့လှပသောကောင်မလေး
ငါရှိသည် 115 ကာလ၏သက်တမ်းအတွင်းမှာပဲ:
နေဆဲရုန်းကန်အားလုံးသူတို့အားရုံကကပ်။ အချိန်ကဒီဒဏ်ရာကိုပျောက်စေတော်မူ၏နှင့်ဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်။ ဘဝရဲ့ဂူစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးသောသူကဲ့သို့သင့်ရဲ့မစ်ရှင်ကသင့်ရဲ့ခွေးစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
05 မှာ 27 / 2012 / 7: 19 ညနေ
Fom Reddit: ငါကဒီစမ်းသပ်မှုစတင်သောအခါအထက်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့လူကို။
LINK - ငါဒီစမ်းသပ်မှုကိုစလုပ်တဲ့အချိန်ကထက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။
nofap မှတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးဖို့ပြောတယ်။ ထိုအခါသင်၏bainonpornကြည့်ရှုခြင်းနှင့် nofap ပုံပြင်များကိုပိုမိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါကရိုက်ချက်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါမှာပြpornနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့တစ်ပတ်တောင်မပြည့်ခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ရှိကောင်းရှိနိုင်မည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်တော်တကယ်မဖြေရှင်းခဲ့ပါ။ ကြည့်လိုက်ရင်မှန်လား
ငါအလောင်းထားချိန်အထိစောင့်ရတော့မယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီမှာပဟေofိတစ်ခုပဲ။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူနေရန်နှင့်အချို့သောသူများနှင့်အတူနေရန်ယခင်ကထက် ပို၍ လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။ ငါ 'အသွင်အပြင်' ကိုပိုမိုသတိထားမိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုသိမ်မွေ့သောရွေ့လျားမှု၏ရွေ့လျားမှုကိုမရွေးရသေးပါက၎င်းသည်တော်တော်ပြင်းထန်ပြီးနည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ငါအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုတာကိုအပြည့်အဝသတိထားမိ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က OKcupid သို့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသံသယများရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းမှာအတော်လေးကောင်းပါသည်။ ငါချိန်းတွေ့ဖို့နီးကပ်လာပေမယ့်သူမငါ့ကိုအပေါ် flaked ။ လှလှပပအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါစာပို့ပြီးပြီ ထူးဆန်းတာကဒီဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ငါရွေးစရာတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနားကပ်နေတယ်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး ရဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ငါကြိုးစားအားထုတ်ရတော့မယ်။
ငါသည်လည်းလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါရှိခဲ့ဖူးကြောင်းဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုပြောသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါကုထုံးတွေအများကြီးကိုဖြတ်ပြီးခဲ့ကြပြီးအချိန်အတော်အတန်ကြာအောင်သူတို့ထဲကနေထွက်ပြီးနောက်ဆေးဝါးများအပေါ်ပြန်ပါပဲ။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူနေလိုသောစိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ။ ငါ့မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းအများကြီးကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်။
06 မှာ 13 / 2012 / 3: 46 ညနေ
NoFap ကသင့်ကိုစူပါပါဝါများကိုပေးပါသလား။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်လူများအားရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီသက်ရောက်မှုမျှသာလား ကျနော့်အမြင်…
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်းဤအရာသည်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါ။ NoFap ပြီးနောက် XX ရက်အကြာတွင်သူတို့သည်အခြား fapstronauts များကဲ့သို့စူပါပါဝါများအဘယ်ကြောင့်မရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်လူများစုသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိမေးမြန်းသည့်နေရာများတွင်အလွန်များပြားသောပို့စ်များရှိခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာ NoFap သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောလိုသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် (၂၀၀၈/၂၀၀၉ ခန့်တွင်) လူတို့သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်ဟုထွက်ပေါ်လာသောအင်တာနက်ပေါ်တွင်လူများစတင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့သည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်မြဲသောစိုက်ထူမှုကိုရရှိနိုင်သည်။ အချို့သောကောင်းသောဟောင်းသေမင်းချုပ်၏အကူအညီ။ ထူးဆန်းသည့်အရာမှာအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ထောင်နှင့်ချီသောလူများသည်ဖိုရမ်ပို့စ်များကိုတုန့်ပြန်မှုများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အခုတော့အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါလူတွေဟာသူတို့ဟာမိန်းမကိုယ်လိင်အင်္ဂါမတူနိုင်တဲ့လိင်အင်္ဂါမတူနိုင်တဲ့အစဉ်အဆက်အစွန်းရောက်လိင်အမျိုးအစားများကိုမြှင့်တင်ခြင်းနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကမျှော်လင့်ထားတယ်၊ သူတို့က porn ကိုကြာကြာကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရပ်တန့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ desentization ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိမ့်မယ်။
ထိုစဉ်က YBOP၊ NoFap နှင့်အခြားဖိုရမ်များစွာမရှိသောထိုသူများသည်သူတို့သည်တစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထူးဆန်းသောမြည်းများက၎င်းကိုအမှန်တကယ်မိန်းမများမရရှိနိုင်ကြသော်လည်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများကအပျိုကညာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပျက်ပြားသွားစေတဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့နှစ်အတော်ကြာပျက်ကွက်ခဲ့ကြရတယ်။ သူတို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်ပုံမှန်ပြည့်စုံသောဆက်ဆံရေးကိုဘယ်သောအခါမျှရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းတို့သည်သဘာဝတရား၏မထင်မှတ်သောအရာများဖြစ်သောကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဝေးကွာသွားပြီးရသေ့များဖြစ်လာသည်။ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေဘယ်လောက်များများ PMO စွဲတာလဲ၊ ငါ့အတွက်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကြက်၊ ကြက်ဥ (အပြာစွဲလမ်းမှု (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေသီးသန့်ဖယ်ထားတာ) ကဘာလဲဆိုတာကိုပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားမိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် PMO မရှိတာကဒီယောက်ျားတွေရဲ့ porn-induced ED ကိုကူညီပေးတယ်။ ပုံမှန်လိင်စိတ်ကလွဲပြီးအခြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလည်းစတင်လိုက်ပြီ။ - စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုတိုးလာခြင်း၊ ကမ္ဘာ၏ ...
ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ ငါအပျိုဖော်ဝင်အလယ်၌စတင်, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအများအပြားမအောင်မြင်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုပျက်စီးစေသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်လာသည်။ လိင်မှုကိစ္စမပါဘဲစီးပွားဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုမရှိသလောက်နည်းသောယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာတွင် - ကျွန်ုပ်၏အမြဲလိုလိုကိုအမြဲအမှတ်ရနေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသောရုပ်ရှင်ထဲတွင်လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့တိုင်း“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသောရုပ်ရှင်၌“ Wow, ထိုလူအတွက်မည်မျှလွယ်ကူသည်၊ ဒီလိုလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်မှကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအလွယ်တကူစိုက်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” ၀ တ္ထုမဂ္ဂဇင်းအလယ်၌လှပသောအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါ“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတွေဒီလောက်ပူနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ရှင်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ကအစွန်းရောက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ရင်ငါနှိုးလို့မရဘူး။ ငါအရမ်းလိုက်တယ်။ အလားတူသာမန်နေ့စဉ်လိင်ဆိုင်ရာပြက်လုံးများ၊ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်သူစိမ်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အတူ။
ငါ NoFap မစတင်မှီတစ်နှစ်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုရောဂါနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရသောစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များနှင့်စိတ်ပညာရှင်များနှင့်ပင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးမရှိသောစိတ်ကျဆေးများကိုသောက်ချင်ခဲ့သည်။
YBOP မှတစ်ဆင့် (ထိုအရာများသည်အမျိုးမျိုးသောဖိုရမ်များတွင်ပါ ၀ င်သော Gary Wilson မှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၏အဓိကပြproblemနာမှာ ၂၄/၇ တွင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပြီးအလေးဆုံးကျောက်ကိုငါ့နှလုံးမှဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ငါသည်ငါ့ပထမ ဦး ဆုံး NoFap Streak (cca ရက်ပေါင်း 24) တွင်သွားသောအခါအခြားသူများအကြားအစီရင်ခံသကဲ့သို့အလားတူစူပါပါဝါများကိုသတိပြုမိလာသည်။ အဲဒါတကယ်ထူးဆန်းသလား။ ၇ ဘီလီယံရှိသောကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုအားဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းနေစေခြင်း၏အဓိကအချက်မှာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး၎င်းသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ ၁၀၉ ရက် NoFap နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ ယုံကြည်မှုရှိမှု၊ လူမှုရေး၊
TL; DR - အဓိကအချက် လူတွေကသတင်းအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်လုံးဝမအံ့သြပါဘူး။ ဆိုးရွားလှသည့်ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါသည်မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာရှိ psyche အတွက်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ PMO အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် PMO ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းမရှိသောအခြားသူများသည်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုမမြင်တွေ့ရခြင်းမှာကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ပထမရလဒ်အနေဖြင့်မည်သည့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုဖော်ပြသည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ အချို့ဟာအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ခံစားရနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုမျိုးကိစ္စမှာ၊ သင်ပြboနာကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့မခေါ်နိုင်ဘူး၊
မင်းနဲ့လုံးဝသဘောတူတယ် သူတို့ကစွဲလမ်းမှုမရှိသော၊ သို့မဟုတ် ED ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရပုံရသည့်လူများထံမှပို့စ်များကိုတွေ့ရပြီး Nofap သည်အများအားဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စ၍ စတင်ရန်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများမဟုတ်ကြပေ။ ပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာနှင့် ED မကောင်းသောသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက်တွင်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခံစားမိသည်၊ ။ ဒါ့အပြင်ငါနောက်ဆုံးတော့ ED ပိုကောင်းလာပြီအစိမ်းရောင်အညွန့်ကိုတွေ့မြင်နေသည်ထင် - အနည်းငယ်နံနက်သစ်သားအနည်းငယ်ရှိသကဲ့သို့, အရာအားလုံး, စိတ်ဓါတ်များနှင့်ယုံကြည်မှုအဖြစ်သူတို့ကောင်းကင်ပြာဖြစ်ကြသည်!
သင် erectile ပြproblemsနာများရှိသည်မဟုတ်ရင်တောင် NoFap ကအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုလုပ်ပေးတာကိုပေါင်းထည့်ပေးပါ။ ငါအနည်းငယ် desensitisation ခံစားခဲ့ရပေမယ့် (မ porn ကိုငါ့အရသာအလွန် vanilla ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်)
porn အသုံးပြုမှုအန္တရာယ် fucking ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကပိုကလူကဒီသတိပြုမိခဲ့အလိုရှိ၏။
ငါစိုးရိမ်ပူပန်မှု (လူမှုရေးမဟုတ်ဘဲ) ခံစားခဲ့ရပြီး PMO ကိုလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့သည် - ယခုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိသော၊ YBOP တွင်ဘာမှမဖတ်ဘဲမဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ယခုဤရလဒ်များသည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထမဟုတ်ပါ။
ငါတောင်အဘယျသို့ NoFap ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်မည်ကိုမသိဘဲ NoFap စတင်ခဲ့သည်။
သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး ဦး တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပြီး PMO ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါက NoFap သည်သူတို့ကိုလုံးဝကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊
07 မှာ 15 / 2012 / 2: 43 ညနေ
နေ့ 80 + နှင့်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကိုသတိပွုမိ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေချင်ခဲ့တယ်၊ အစမှစတင်ရန်ငါသတိရနိုင်ကတည်းကကြီးမားသောလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများရှိခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကတိုက်သော်လည်း, ငါကအမြဲတမ်းအခြေခံအားဖြင့်ကအတုငါ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
အခုငါသတိထားမိတာကလူတွေနဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခု။ အများဆုံးသိသာမျက်စိအဆက်အသွယ် ... မင်းရဲ့ Brainonporn မှာဖတ်ခဲ့ရတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကစပြီးလူတိုင်းနီးပါးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံမိရုံပဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝတစ်ခုလုံးကိုအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်စတင်ခြင်းနှင့်ရှက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းအားရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားချင်သည်။ အခုငါရုတ်တရက်ပဲ ​​shit မပေးပါဘူး
သို့သော်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယအကြိမ်သို့မဟုတ်နောက်တစ်ခါအနေဖြင့်ခေါင်းကိုထိမိခြင်းရှိသေးသည်ဟုခံစားရနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်“ ရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်ပါ” ဟုသဘာဝကျကျနိဂုံးချုပ်သည်အထိဆက်လက်ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးများသည်သာမန်လူ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်
ငါအပြင်မနေ့ကစက်ဘီးစီးနေတုန်းလူတွေကိုဖြတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ ငါဟာသဘာဝ / အလွယ်တကူပြုံးနိုင်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်သလိုခံစားရတယ်။ ငါအမြဲတမ်းပြုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အရာတွေ၊ သူ့ခွေးနဲ့ကစားနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရထားပေါ်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ကလေးလေးလိုပြုံးနေတာပါ။ ဒါဟာခံစားမှုတစ်ခု…ပျော်ရွှင်မှုနီးပါးပါပဲ။
ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးငါကြောက်လန့်စရာမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရင်းမျက်လုံးချင်းဆုံပြီးကိုင်ထားလိုက်တယ် နီးပါး လုံလောက်အောင်ရှည်လျား။ ပင်ငွေသားမှတ်ပုံတင်မှာမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူပါသေးတယ်ငါ့ကိုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားအပြုံးပေးရသူမ၏တယ်။
ကို un-fuck ဆိုတဲ့-ယုံကြည်၏တိုတောင်းသော၎င်း၏ဘာမျှမ။
ငါဆိုလိုတာကငါအဲဒီမှာမရှိသေးဘူး။ ငါဟာရက်သတ္တပတ်အတော်များများမှာမနက်ခင်းထင်းတွေရှိနေတုန်းပဲ (ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု) ။ အဲဒါကငါမှတ်မိသလောက်မကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကအချိန်ပိုလိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဝင်နေကြတဲ့လူတိုင်းအတွက် ... rewiring သည် linear မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ကြာနိုင်သည်။ သင်မပြောနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ့်အစစ်အမှန်ကတော့ငါကလူတိုင်းကိုဒီအတိုင်းကပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းတယ်။
07 မှာ 18 / 2012 / 10: 58 ညနေ
ငါ 26 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် 14 ၏အသက်အရွယ်ကတည်းက PMO စွဲခဲ့ပါပြီ။ ငါ "ပုံမှန်" porn နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသူကမှ desensitized နှင့်ရှက်စရာအမျိုးအစားများနှင့် fetishes မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ငါကလူန်းကျင်ဒီတော့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာငါအံ့ဩကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ငါရည်းစားမရှိခဲ့ဘူးခဲ့သလဲ အခြားလူများသဘာဝကျကျတစ်ဦးချင်းစီကတခြားများအတွက်ချစ်ခင်ချိတ်ဆက်ရှိသည်ဖို့သလိုပဲ, ဒါပေမယ့်ငါအတုပြုလုပ်ခဲ့ရသည်နှင့်တူငါလူ့မဟုတ်ခဲ့လျှင်အဖြစ်အစဉ်မပြတ်ငါ, ခံစားရတယ်။ ငါသည်လည်းလှုံ့ဆျောမှုမရှိခဲ့ပေ။ ငါ၏အဆွေအများအပြားသူတို့ဘဝနှင့်အတူရှေ့သို့ပြောင်းရွှေ့နေချိန်တွင်ကျွန်မ mindlessly အင်တာနက် browsing အကြောင်းအရာပိန်နာရီဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံး PMO ငါ၏အကိစ္စများများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်ကြောင်း "မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု" ဗွီဒီယိုကိုဖြတ်ပြီးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ဒါဟာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါတော်တော်ငယ်ရွယ်စတင်ခဲ့ကတည်းကငါ "ပုံမှန်" ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသိဘူး။ ငါတခြားလူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ငါနှင့်အတူပါအမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့ယူဆ။ porn ကိုငါ့ရှက်စရာတပ်မက်ခြင်းအတိုင်းများအတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 60 လက်ထက်ကာလ၌ငါပြီးသားအသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးနဲ့တူခံစားကြရသည်။ ငါပင်ကဒီမှာသူတို့အားလုံးကိုစာရင်းပြုစုမနိုင်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြုံတွေ့ခံစားကြပြီ။ သို့သော်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောငါယခုအချိန်အထိကြုံတွေ့ခဲ့ကြရာ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်:
ပိုများသောယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု။ virility ၏တစ်ဦးကအသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့သဘောမျိုး။
အလွန်အကျွံအချိန်အင်တာနက် browsing နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားဖြုန်းဖို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ
ပိုမိုအားကောင်း, ချမ်းသာသောစကားသံ။ ပိုပြီးပီသသောဖြစ်လာခဲ့သည်။
Flatline စတင်ခဲ့သည်။ မိန်းမတို့အားလိင် drive ကို, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ငါ့ကို PMO ကိုရှောင်ရှားဖို့ကူညီတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုယာယီကျဆင်းသွားပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်ရောက်လာတယ်။ အစောပိုင်းကအကြိုးခံစားခှငျ့နေ၏။
လေ့ကျင့်ခန်းမှပိုမိုအားကောင်းအလိုဆန္ဒ။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပိုကောင်းနိုင်ပါ။ ပိုမိုအားကောင်း Feeling နှင့်တိုးမြှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုသတိပွုမိ။
sugary junk အစားအစာမှလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုနဲ့စွဲ။
လှုံ့ဆျောမှုအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ရက်-to-နေ့ကအိမ်မှုဝေယျာဝေးလျော့နည်းလေ့လာ။ ပိုပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့စနစ်တကျဖြစ်လာ။
အပတ်က 8 (တင်ပြ):
ငါ flatline ဆဲပေါ့ဒါပေမယ့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်အပေါငျးတို့သနေဆဲခိုင်မာတဲ့သွားနေကြသည်။ ငါကငျြ့သုံးအထူးသဖြင့်လျှင်, ငါသည်နေဆဲရံဖန်ရံခါစိတ်ခံစားမှုစိတ်ဓာတ်ရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့လျော့နည်းမကြာခဏဖြစ်ကြပြီးပိုမြန်သွား။ ငါတကယ်ကတပတ် 3-4 န်းကျင်ရှိရာပြန်လာမယ့်ငါ့အလိင်စိတ်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ မျှော်လင့်ကြောင်းလာမည့်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
ငါလွယ်လွယ်ကူကူကြောင်းအစအဦးကဒီ nofap ခရီးငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌ရာ၌ခန့်ထားပြီအရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ပြောနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုငါ့ Pre-nofap ဘဝကိုပုံနဲ့ဆင်တူလျှင်, ငါ porn နှင့် fapping ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာခက်ခဲတဲ့ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကသင်၏အသက်ကိုစှာပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
ငါပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်၏တဲ့အခါမှာအဖြစ်အများဆုံး tempted- လိမ့်မည်သည့်အခါဤအဝေးအခြေအနေများမှရှောင်ရှားရန်ခဲ့တဲ့အဘို့အကြှနျုပျ၏အဓိကမဟာဗျူဟာ။ ငါသည်လည်းဤကဲ့သို့သောအချို့သောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် sugary junk အစားအစာစားသုံးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများ, porn အလားတူနည်းလမ်းများ၌ငါ့ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ကြောင့်အဘို့အကြှနျုပျ၏အလိုဆန္ဒတိုးမြှင့်ဖို့ပုံပေါ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သူတို့ကိုရှောင်ရှားသွေးဆောင်မှုကိုလျှော့ချကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဒီသွား Keeping ဆက်ဆက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အလျှင်းမဒီသစ်ကို PMO-အခမဲ့ဘဝမှနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးစောင့်ရှောက်လော့။ အမှန်တကယ်အသက်ရှင်လျက်ခံစားသကဲ့သို့ပျြောမှေ့စရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့အစဉ်အမြဲငါကြည့်ရှုသောအခါအဘယ်သူမျှမ porn ။ ဤတွင်အခြား 60 ရက်ပဲ!
LINK - Day 60 - ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများယခုအချိန်အထိ - လုံးဝထိုက်တန်ပါတယ်။
07 မှာ 24 / 2012 / 3: 54 နံနက်
အမေးခံရတဲ့မိန်းကလေးကသူမအလုပ်မှာမှောင်မိုက်တဲ့ Knight ကိုတွေ့ချင်နေတာလား။ သငျသညျအစဉျအမွဲငါသည်သင်တို့ကိုငါမောင်းနိုင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုလိုလျှင် passively ဟုပြောသည်။ နောက်တခါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါထွက်မေးတဲ့အခါငါပိုပြီးတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ သူမအဖြေမပေးသည့်အခါသူမအားမေးမြန်းသောအခါ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမိသောအခါ၊ ဒါကမလွယ်ကူလှပါဘူး၊ ငါအားလုံးဟာတခြားလူတွေနဲ့ချိန်းတွေ့နေကြတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမေးကြည့်ရင်ငါဟာအရှုံးသမားလို့မထင်ဘူး။ သူမသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အရာထက်မဆို ပို၍ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့သူမအပေါ်ငါ့စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးလာမည့်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘာဖြစ်မည်ကိုမအံ့သြတော့ပါ။ ၁၅ ရက်တာနောက်ဆုံးတော့မိန်းမတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးအသက် ၂၀ အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ချိန်းတွေ့ခြင်းလောကကိုဝင်ရောက်ချင်တယ်။
07 မှာ 24 / 2012 / 4: 00 နံနက်
ငါ3လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်ကဤခရီးစတင်
စစ်မှန်သောအချစ်၏ ၃ ပတ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု
ငါဒီခရီးကို3ပတ်အကြာကစတင်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုကျောက်ဆောင်အောက်ခြေထိမှန်နှင့်အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအလုံအလောက်ရှိခဲ့သူတစ် ဦး သည်လူ။ ငါ့အလေ့အထကရိုးရာဓလေ့တစ်ခုပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀ မ်းနည်းပူဆွေးတာ၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့ငါသူမကိုစကားမပြောခဲ့ဘူး။ အများအားဖြင့်ငါ၏အလုပ်ရပ်များခံစားကွဲပြားခြားနားသောပါပြီနိုင်ဘူး။ အဆိုပါဖိအားကိုတည်ဆောက်တည်ဆောက်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါရပ်နေတဲ့ရေခဲပေါ်မှာအက်ကြောင်းတွေချပြီးအနက်ဆုံးတွင်းထဲကျသွားတယ်။
ဤအချိန်ငါပြန်မျက်နှာပြင်မှရေကူးကာ motherfucking jetski အပေါ်ရဖို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သတိပြုမိသောမိန်းကလေးများကကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်သည်။ သူတို့တည်ဆောက်ထားသည့် testosterone ဟော်မုန်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်နှင့်တူသည်။
ကျွန်တော့်စိတ်ကပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ တချို့က "fuck ဆိုတဲ့ကိုမပေးတာ" လို့ပြောကြသလိုကြီးမားတဲ့အမှတ်အသားပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အတွေးများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဆောင်ရန်၊ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ယနေ့စကားပြောရန်ခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းသည်နှေးကွေးနေဆဲဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏အမှန်တကယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာများသောအားဖြင့်, အဆင်မပြေရှက်နှင့်နိူးစနှောမှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်းနေသည်။ ကြှနျတေျာ့တဦးတည်းသဘောထားပြင်းထန်, ဿုံဖြတ်ပြီးလာသောကျေးကိုချစ်နေကြသည်။
အားကစားခန်းမထဲမှာအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးကြီးသားအပေါင်းတို့, လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ် 20lb အတွက်တိုးပွားစေပါသည်။
အရောင်: မနေ့ကငါနေရောင်တစ်တွေများနေ့၌အကျဉ်းချုပ်မှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါလှလှပပအရာအားလုံးကိုတက် lit ။ တိုင်းသေးငယ်တဲ့အရာ၏အသေးစိတ်ကိုကိုသတိပွုမိ nice ။
ယခုအချိန်တွင်မိန်းကလေးနှစ် ဦး ကိုလိုက်ရှာခြင်း၊
07 မှာ 24 / 2012 / 5: 20 နံနက်
Fapping ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ၏ကွာခြားချက်များ အဘယ်သူမျှမ Fapping အတွေ့အကြုံများ
ငါပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းငါ၏မျှတသောဝေစုပြုသောအမှု, ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေချင်ပါပြီ။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်သောမည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမဲ့ကျွန်မကိုလည်း (တောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုသတိပေးမှုကဲ့သို့) NoFap ၏အပြုသဘောအကျိုးခံစားခွင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တွက်ဆ။
နံနက်ဖြေ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့သို့မဟုတ်တစ်ညမသာဖြစ်ခဲ့လျှင်နိုးထရန်ခက်ခဲပါသည်။ စိတ်ကို groggy ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနည်းနည်းပိုပြီးအိပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တခါတလေမနက်ခင်းမှာတောင် fap တောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်မှာထပြီးအမြန်ပြေးရတယ်၊ အလုပ်နောက်ကျတာ၊ စသည်တို့ကျွန်ုပ်တစ်နေ့တာ၏အရေးအကြီးဆုံးအစားအစာကိုကျော်သွားသည်။
Talking နှင့်လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်: လျင်မြန်စွာပြောဆိုမှုများအဆုံးသတ်လိုသော, (! သင်သည်ဦးနှောက်မြူသူကပြောတယ်) မိန့်ခွန်းတက် jumbling, မျက်လုံးချင်းရှောင်ရှား, စကားပြောဆိုမှုအစပျိုးဘယ်တော့မှ
အထဲကအလုပ်လုပ်ဖြေ - ငါလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းအတွက် ၃ စုံသုံးခုလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းငြီးငွေ့လာရင်များသောအားဖြင့် ၈ သို့မဟုတ် ၉ ပတ်လောက်မှာခဏခဏစကားများနေတတ်တယ်။
လူမှုရေးဘဝ: ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နေထိုင်လိုသောတွေ့သည်ငါထွက်သွားရကြဘူးသောအဖြစ်အပျက်မှာတော့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ငါ့အအုပ်စုကိုအပြင်ဘက်သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံမကိုကြိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ငါကလူ (ဒီဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှ) ငါ့ထံသို့မလာမျှော်လင့်သည်။
အချိန်မှန်: related လျှင်သေချာပေမယ့်ငါသတိထားမိကြပါပြီတစ်ခုခုမဟုတ်။ လကျထကျတှငျငါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်တွေ့ဆုံမှန်လျှင်ငါနှောင်းပိုင်းတွင်အစဉ်အမြဲဖြစ်ကြောင်းကို FAP ။
နံနက်: လန်းဆန်း feeling, သဘာဝကျကျထ။ တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နံနက်စာလုပ်ဖို့အချိန်ရှိသည်! ငါကသတင်းစာကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းယူ နံနက်ဖြစ်သင့်လမ်းကို။ ငါအလျင်စလိုအလုပ်လုပ်ရန်မလိုပါ, ငါယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်အေးလက်အေးနှင့်တစ်နေ့လုံး၏ကျန်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသင့်ရဲ့နေ့ရက်များကိုအောင်သို့မဟုတ်ချိုးဖျက်နိုင်ပုံကိုရယ်စရာ။
Talking နှင့်လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြေကျွန်တော်စကားစပြောတယ် ခန်းမထဲလမ်းလျှောက်နေရင်းမျက်လုံးချင်းမဆုံမိဘူး ငါမျက်စိ၌အသေမိန်းမကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြုံး; သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ပြုံးပြကြသည်။ ဘယ်သူသိလဲ?!
အထဲကအလုပ်လုပ်ကျွန်မမှာစွမ်းအင်တွေပိုများလာသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါကရလဒ်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်၊ fapping မှအရင်းအမြစ်များနှင့် DNA ကိုဖြည့်တင်းရန်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အပိုအလုပ်လုပ်ရန်မလိုပါ။ ငါသည်ငါ့အစုံအပြီးသတ်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောခံစားရတယ်။
လူမှုရေးဘဝဖြေ Reddit ကဒါကိုမုန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ 'YOLO' ပုံစံအသစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြီ။ သူငယ်ချင်းများကိုအပြင်ထွက်ရန်ခေါ်ဆောင်။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်းကိုမကြောက်၊ ရှက်ရွံ့မည်မဟုတ်ပါ။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာခံစားခဲ့ရတဲ့သားရဲကိုယဉ်ပါးအောင်လုပ်နေတာကိုသိတယ်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို (နှင့် YMMV !!) ငါစုံတွဲတစ်တွဲကယ့်ကိုချစ်စရာကောင်မလေးနှင့်အတူချိန်းတွေ့တယ်။ ငါ nofap တစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးအသက်မ ၀ င်မီကျွန်ုပ်၏အချိန်ကျဆင်းလာကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုတွန်းအားပေးနေသည်ဟုထင်ပါသည်။ PMO ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုလုံးကိုအရာထမကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်လှည့်စား။
အချိန်မှန်ဖြေ - နောက်တခါကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတော့မဆွေးနွေးရသေးဘူးထင်တယ်။ ငါအမြဲတမ်းအစောပိုင်း၊
ငါသည်သင်တို့အချို့ကိုမှာအနည်းဆုံးသောဤအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံ, ငါတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြီမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်ဤကိုးကားနှင့်အတူသင်တို့ရှိသမျှစွန့်ခွာ, "အဘယ်အရာကိုမျှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုထက်ပိုမြန် [FAP ဖို့တိုက်တွန်း] မှေးမှိန်။ " အထဲကအဲဒီမှာ Get နှင့် NoFap မြင့်မားတဲ့ကျပ်တည်းစွာလိုက်။ ငါပဲရှင်းလင်းပြတ်သား၏ခံစားချက်ချစ်သောကြောင့်ငါဖြစ်၏ငါသိ၏။
07 မှာ 24 / 2012 / 11: 14 ညနေ
ဒါ့အပြင်ငါ fap ၏ 20 ရက်အတွင်းအကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲများကိုမြင်လျှင်စဉ်အတွင်းငါဖော်ပြသင့်တယ်။ ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးမိန်းကလေးများနှင့်လည်းစကားပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်အတွက်လွယ်ကူသည်။ အဘယ်သူမျှမ Fap ကျိန်းသေသွားကြဖို့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ No Fap ကိုမတွေ့ခင်ကျွန်တော်သိခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ဒါလုပ်ကြည့်ရအောင်။ LINK
07 မှာ 24 / 2012 / 11: 32 ညနေ
LINK - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းအလယ်အလတ် PMO အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငါ ၁၁ ရက်ကြာ nofap ရှိခဲ့တယ် ငါကအပျိုစင်မဟုတ်ပေမယ့်သုံးနှစ်အတွင်းမှာငါ PMO ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ nofap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်တကယ့်စစ်မှန်ပြီး၎င်းအားရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ဖြတ်သန်းသူတိုင်းသည်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်။
ကျွန်မရဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်မရဲ့ရွယ်တူချင်းတွေထက်ယုတ်ညံ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမှသူငယ်ချင်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ရန်ကောလိပ်ကိုခုန်ကျော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အများစုဟာ ၅ နှစ်အရွယ်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာထဲကိုထိုးသွင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ငါအရမ်းကောင်းစွာဖျော်ဖြေသကဲ့သို့ငါ, ငါ့အလုပ်မှာလေးစားခံခဲ့ရသည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက်စုဝေးမှုအများစုကိုမသွားနိုင်တော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော့်အပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့တွေးပြီးဒီအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့အတွေးစဉ်ကိုသွားခဲ့တယ်။
မိတ်ဆွေစစ်မရှိ၊ ဒီဆိတ်ငြိမ်သောကလေးကိုမည်သည့်မိန်းကလေးမှစိတ်ဝင်စားမည်မဟုတ်ဟူသောခံစားချက်ကြောင့် PMO သည်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသောအချိန်ကိုရှေ့ရှုကြည့်ပြီးဆန္ဒပြင်းပြလိမ့်မည်။ ငါမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတာကိုရှောင်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျွန်တော်အသက် ၂၁ နှစ်မှာတောင်မှဒီဟာကနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်မြဲနေခဲ့တယ်။
တစ်ခါတလေကလပ်တွေဆီကိုသွားပြီးမလုံလောက်တာကိုခံစားမိပြီး“ ငါ့ရဲ့တစ်ကိုယ်တည်းအချိန်” ရမယ့်အချိန်ကိုရေတွက်မိတယ်။ ၎င်း၏လုံးဝသနားစရာ။
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၃၀ ပေါင်ထည့်ပြီးဝက်ခြံပျောက်သွားတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါမ fap တွေ့ရှိခဲ့သည်အထိ။ လွန်ခဲ့သည့် ၇ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လူတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောခြင်းဟာကျွန်တော့်အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ငါဟာအရှုံးသမားတစ်ယောက်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထွက်မလာခင်မှာထွက်ပေါ်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုစောင့်နေရင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။ ယခုငါသူတို့ကိုအစပျိုး, သူတို့ကို ဦး ဆောင်, နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကိုခံစား။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုသတိပြုမိကြပြီးတစ်ခါနှင့်မျှမတူအောင်ကျွန်ုပ်နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပရောပရည်လုပ်နေကြသည်။ ဤအခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်အတန်ငယ်ရှက်တတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။
ငါကျောက်တုံးအောက်မှာနေနေရတာငါခံစားရတယ်။ တစ်နေ့တာလုံး fap မရှိတာနဲ့ငါနည်းနည်းပိုအားကောင်းလာတယ်။ Im ကအဲ့ကျောက်ကိုနည်းနည်းပိုမြင့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ငါမြှင့်လေလေ၊ ပျော်ရွှင်မှုပိုမိုရရှိလေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွင်းတူးရာတွင်းမှထွက်လာသည့်အမှောင်ထုများများများလေလေကျောက်ကကျွန်ုပ်အားတိုးတိုးလေးပြောနေသည်။ ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ နောက်မှထပ်ကြိုးစားပါ ဦး မယ်”
ငါ fap လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါရရှိခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်၊ ငါ ၁ ပြန်လာမယ်။ ကျောက်တွင်းကနေငါသိလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါ fuck ဆိုတဲ့မေ့မေ့လျော့လျော့ထဲသို့ထိုကျောက်ကိုပစ်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ၁၁ ရက်ပါ။
07 မှာ 28 / 2012 / 1: 26 နံနက်
Dude, nofap ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငါ့အ ADD ၏လျှော့ချခဲ့သည်။
Dude, nofap ကငါ့ရဲ့ ADD ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လျှော့ချလိုက်တယ်။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆေးဝါးမှတပါး, မည်သည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အဘို့မသောက်ဖူးဘူး။ ၎င်းသည်အသင့်အတင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍ ပျော်ရွှင်။ မျှတမှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် fapping သည်လွန်ခဲ့သော ၆ လမှ (၆ လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည့်အတွက်တကယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ စားခြင်းများမပြုခဲ့ဘူး) ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအလဲများကိုအများအားဖြင့် nofap ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
07 မှာ 30 / 2012 / 4: 44 နံနက်
သငျသညျအများအပြားကဲ့သို့ပင်, ငါမိန်းမနှင့်ရွားလှခဲ့တာဒါငါသည်ငါ့နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်ချွတ်လာတတ်သည်။ Big အမှား။
ငါငယ်ငယ်တုန်းက (၁၇-၁၈) ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်းခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးတွေကငါနဲ့အတူတီးခတ်ကြ၊ အရာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ငါဒါနဲ့ကျေနပ်တယ် ငါ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် 17 နှစ်အရွယ်ကဲ့သို့ချွတ်တုန်လှုပ်စေသော, ဒါကြောင့်ဒီဆွဲဆောင်မှုကိုမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သို့လှည့်။ ငါနဖူးကိုဆွဲမထုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအာရုံကြောတွေကြောင့်ငါမလိုအပ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှာ porn ရှိတယ်။ ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေလိုအမျိုးသမီးတွေကိုအောင်ချင်လို့ပါ လိင်သည်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကစားလိုသည်။ သင်အနိုင်မရလျှင်ဂိမ်းများသည်ပျော်စရာမကောင်းပါ။
ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ငါဟာငါ့ကိုယ်ပိုင်နေရာရလာခဲ့တယ်။ ငါလူရွှင်တော်, ဒါကြောင့်ငါတစ်ယောက်တည်းအနားယူနှင့်အိုးဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလိမ့်မယ်။ ငါကပျော်စရာအတွက် porn ကြည့်တာပေါ့။ အနားယူရုံသာ မကြာခင်မှာပဲလှပသောမိန်းကလေးများသည်ငါနှင့်အတူပရောပရည်မလုပ်တော့တော့ပေ။ အမျိုးသမီးတွေကိုအိတ်မထည့်နိုင်လို့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ငါတကယ်လိုချင်တာကိုလျော်ကြေးပေးရန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း, AFFECTION, အသိအမှတ်ပြုမှု။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုအပ်တာကိုပြောတာက“ မင်းငါ့အတွက်လုံလောက်တယ်။ မင်းကိုငါလက်ခံတယ်” လို့ပြောတယ် သိထား သူတို့သည်ငါ့အားပျော့သောလိင်တံနှင့်ချက်ချင်းသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်လိင်မဆက်ဆံလိုကြပါ။ ဒါကြောင့်ငါချွတ်လူရှုပ်
မတိုင်မီက / r / NoFap , မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအိပ်ရာသွားမယ့် fuck ဆိုတဲ့ပစ်ချတက်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုချွတ်လာတတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒါဟာကြောက်စရာကြီးကငါ့ကိုဦးနှောက်အာရုံကြောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တိုင်း fuck ဆိုတဲ့နေ့က
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရရင်ငါကိုယ်တိုင်“ အိုး၊ ဒီနေ့ငါဒီနေ့လူမိုက်လား” လိုမိုက်မဲသောမေးခွန်းများမေးခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီလောက်ကငါစိတ်ရှုပ်သွားလို့ငါလိင်ဆက်ဆံမှာလား။ ” အခုတော့ငါအနိုင်ရမယ့်မသာမဟုတ်, ငါမကျင့် လို ဂိမ်းအနိုင်ရ။ က fuck ဆိုတဲ့အရှက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်ငါတှေ့ / r / NoFap။ ငါ porn မှာရှာဖွေနေရပ်တန့်နှင့်ယခုငါ motherfucking Boss နဲ့တူခံစားကြရသည်။
ယခုငါအမျိုးသမီးတွေလိုက်ဖမ်း, ရပ်တန့်ခဲ့ကြပြီးလိင်ကြောင်း FUN။ ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအိပ်ရာကိုသွားလျှင်မူကား, ငါသည်တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်လားရလိမ့်မယ်နဲ့ကျွန်မသူမ၏ဘရိတ်ချွတ် fuck ဆိုတဲ့လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ ငါအနိုင်ရရန်နှင့်ငါအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိမ်း, ကစားရန်ပျော်စရာပါပဲ။ မိန်းကလေးများငါ့ကိုအတည်ပြု။ သူတို့သညျငါ့ကိုလူမဟုတ်, မိမိဒစ်လုံးကိုတစ်ဦးတည်းနှင့်အတူကစားခြင်းဟာအထီးကျန်နည်းနည်းယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်တယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ကြှနျုပျကိုမွငျခငျြတဲ့သူကဲ့သို့ပြုမူဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ရှိသည်။ သင် လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်
TL; DR ရပ်တန့်ခြင်း၊ ရှစ်ဆစ်ဘဝကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းကသင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အိုင်တီအားလုံးသင်တို့အပေါ်မှာရှိတယ်
07 မှာ 31 / 2012 / 8: 34 ညနေ
တစ်ဦး Alphamale သို့ဖွင့်
ကျွန်ုပ်ဘဝဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးများစွာသောအရာများဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အာလဖအမျိုးသားဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၆'၃၊ အနက်ရောင်၊ အားကစားသမား၊ ကျွန်ုပ်သည်တူရိယာ ၃ ခု၊ တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းနေမှာပါ၊ ယောက်ျားအများစုကကြက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် fapping ငါ့ကိုပြန်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ အပြင်ကိုထွက်ပြီးကြက်တွေကိုတွေ့တော့အိမ်မှာအဲဒီကြက်တွေအကြောင်းစိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ငါပျင်းရိနေပြီ
သို့သော်အားလုံးပြောင်းလဲမှုကြောင့်။ တစ်နေ့မှာတော့, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစား၏ရှည်လျားသောတစ်နေ့ပြီး, ကိုယ့်ငါရန်မတန်ဖိုးကိုရှိသည်ဘဝမှာဤမျှလောက်များစွာသောမလိုအပ်တဲ့အရာရှိသည်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မအရှုံးမပေးချင်ခဲ့သမျှသောအမှုအရာများစာရင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ -video ဂိမ်း -junk အစားအစာ -television -fapping
ကောင်လေးတစ်ယောက်, ငါ့အသက်ကိုလှည်သိရသည်။ ငါအလေးအနက်ထားငါ၏အလေ့ကျင့်ရေးတာစတင်ခဲ့ပြီး, ငါလအတွင်းရှိထက်တစ်ပြိုင်နက်အဆီဖြတ်တောက်နေချိန်မှာ၏ရက်သတ္တပတ်ဤစုံတွဲအတွက်ပိုပြီးအစွမ်းသတ္တိကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ အစဉ်မပြတ်ငါစာအုပ်တွေမုန်းကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်အခုတော့သူတို့အဘို့အတောင့်, ငါ (တစ်ခုခုငါပြောချင်ထင်ဘယ်တော့မှ) ဂိမ်းတွေကကနှင့်တီဗီထက်ပိုပြီးသူတို့ကိုပျော်မွေ့။
ဒါကြောင့်ငှာကွိမျမှကြွလာသောအခါအခုတော့ငါ idolize ရန်အသုံးပြုသောကောင်လေးဖြစ်လာကြပါပြီ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏နံပါတ်ရလာနိုင်တယ်လို့သူများသည်ယောက်ျားတွေ။ ငါ့ကိုယ်ပိုကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်သကဲ့သို့, ငါခိုလှုံရာကိုပြု၏။ ကျွန်မမကြာခဏ shaving စတင်ခဲ့ပြီး, ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသှားပါမဖြစ်မှီငါသည်ကောင်းသောကိုကြည့်သေချာအောင်။ ဤအတူ, အမျိုးသမီးငါ့ထံသို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏ "ငါ duck မပေးပါဘူး" စိတ်ဓာတ်ငါ့ကိုအခြေအနေတစ်ခုအနိုင်ရရှိ / အနိုင်ရရှုမြင်စေသည်။ အခုငါကျပန်းအမျိုးသမီးတွေဆီကိုသွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်စကားပြောတယ်၊ ငါ့မှာဘောလုံးတွေတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ လူအများကအခုငါဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ငါထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ ယခုငါနောက်ဆုံးတော့ဒီကြည့်ဖို့စတင်နေပြီ။ သငျသညျယောက်ျားတွေအဖြစ်ကောင်းစွာဒီချင်လျှင်။ ငါလုပ်သောအရာတစ်ခုမှာငါမှန်ထဲကြည့်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်သင်ပြောဆိုပါ။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမင်းရဲ့ sexy သားရဲကိုပြောပြပါ။ မိန်းမတွေကမင်းကိုလိုချင်တယ်။ မင်းအဲဒီလိုလုပ်ရင်မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ။ )
ငါအမြဲငါ့သူငယ်ချင်းတွေနောက်လိုက်ဖို့ကောင်လေးဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ငါပြောတာက "ငါတို့ဘာလုပ်နေလဲငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါဟာဘာမှစိတ်မ ၀ င်စားဘူး" တဲ့။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခုတော့လူတွေဟာအဖြေတွေကိုရှာနေတယ်။
အားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချုပ်တည်းနိုင်ဖို့အားပေးတဲ့အတွက် NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပါ။ alpha အထီးဖြစ်ခြင်းအားလုံးအကြောင်းပါ။ ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကောင်လေးဖြစ်ခြင်း။ ချွတ်လို့မရတဲ့ကောင်လေး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောသူသည်ဖြစ်ခြင်း။ လူတွေကအဖြေကိုရှာတဲ့ကောင်လေး။ ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘဲနောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်း။ နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ငါတို့အားလုံးသည်လိင်ဆိုင်ရာသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများအားဆွဲဆောင်သောကောင်လေးဖြစ်ပါစေ! အရေးမပါသည့်အခြေအနေ။
TL; DR သည် fapping ကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲ၊ သင်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမကသင်အမြဲတမ်းလိုချင်သည့်လူဖြစ်လာသည်။ မင်းလိုချင်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့မင်းရဲ့စိတ်၊ ဘဝနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပရိုဂရမ်သွင်းပါ။
ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Marnia ရော်ဘင်ဆင် says:
08 မှာ 04 / 2012 / 3: 04 နံနက်
ငါ 21 နှစ်ရှိပြီဖြစ်၏, ငါဤနောက်ဆုံးအနည်းငယ်အများအားဖြင့်အသုံးမကျသောနှစ်ပေါင်းအားလုံးအတှကျတက်စေရန်အရာတွေအများကြီးရှိသည်များကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ အဘယ်အရာကိုငါ [မျှ PMO ၏3ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်] အကြောင်းကိုအများဆုံးဝမ်းသာတယ်, အပြစ်မရှိသောရက်ပေါင်းသည်ငါ့စိတ်ကိုတကယ်အစဉ်အဆက်အတိုင်းချွန်ထက်သည်, ငါမူလတန်းကျောင်းအတွက်အခါငါပြုသကဲ့သို့အဖြစ်ချွန်နှင့်စပ်စုခံစားရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အခြားယောက်ျားတွေပြောခဲ့သလိုပဲငါတော်တော်လေး alpha ခံစားရတယ်။ ငါအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပြီးအများစုကငါ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားလို့ငါ့အတွက်အရမ်းကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ယခုနွေရာသီအားလပ်ရက်အနားယူရန်အိမ်ပြန်ရောက်နေသောကျွန်ုပ်သည်ဤသူအချို့နှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုအသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ပြီ။ သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၏ပထမနေ့တွင်သူတို့ခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤနေရာတွင်ရှိသည့် shit စစ်ဆေးမှုများကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလှိမ့်ချလိုက်သည်။ ယခုသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ပိုမိုလေးစားစွာဆက်ဆံသည်ကိုပြောနိုင်ပြီ အံ့သြသွားတယ် သူတို့ကရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ကိုသူတို့ပြonနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဥာဏ်တွေတောင်းတယ်။ ရုတ်တရက်သူတို့ဖခင်လိုခံစားရတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၈၀ ပြောင်းပြန်လုပ်တယ်။
ငါ PMO ၌လုပ်ကြလျှင်ငါ spineless ဖြစ်လာဟုပြောအလေးအနက်ထားလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြဖြစ်ပါတယ်။ ငါလူသားတစ် ဦး အတွက်သနားစရာဆင်ခြေဖြစ်လာသည်။ အရမ်းစိတ်ခံစားမှုမရှိယုံကြည်မှုမရှိရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, ဖြောင့်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ထိုအခါငါအလေးအနက်ထားဤကဲ့သို့သောအသကျရှငျနှစ်ပေါင်းများစွာသွားပြီ။ အခုတော့ငါဟာထိန်းချုပ်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဒါက ၂၂ ရက်ပဲ။ ငါရက်ပေါင်း ၆၀ လောက်မှာငါတောင်ပံပေါက်နိုင်တယ်။
သင်သည်သင်၏စွမ်းအင်တက်ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏အတိတ်အတွက်ကြီးမားသောနံရံများပါပြီမယ်လို့အဘယ်အရာကိုဘယ်မှာ unconquerable အလိုတော်သင်ရုံကျော်ခြေလှမ်းဖို့ရှိသည်နည်းနည်းဒူးမြင့်မားတဲ့ခြံစည်းရိုးဖြစ်လာကြောင်းရယူပါ။
08 မှာ 27 / 2012 / 1: 43 နံနက်
Blu-ray မှတဆင့် Going
ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းကွဲနှင့်အတူ Best Buy ၏ Blu-Ray အတန်းမှာဖြတ်သန်းသွားစဉ် Band of Brothers အဖွဲ့ကိုစင်ပေါ်တွင်တွေ့ပြီးထိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကောင်းပြီ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော်တို့ကိုချဉ်းကပ်တဲ့နေရာကနေပြီးသူမရဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးသူမကဒီပြပွဲဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်။
ဤသည်လုံးဝငါ့ကိုအံ့အားသင့်စရာယူခဲ့ပါတယ်။ nofap မတိုင်မီကဒီအခြေအနေဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို nofap အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချို့သော“ စူပါပါဝါ” ကိုကျွန်ုပ်ရရှိပြီဟုမထင်မှတ်သော်လည်း fapping မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစွမ်းရည်များတိုးပွားလာသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသဘောကျတယ်။ ချည်ဖို့ Link ကို
08 မှာ 27 / 2012 / 1: 44 နံနက်
ဒီညအစောပိုင်းမှာငါသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ခန်းမှာရောက်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်အခန်းဖော်များနှင့်မသိသောလူများနှင့်အတူရှိနေသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်အချို့သောအဆင့်ရှိလူအများစုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်အနေနှင့်အတော်လေးသက်သောင့်သက်သာရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာလူ ၆ ယောက်၊ အသိမိတ်ဆွေအားလုံးနဲ့စက်ဝိုင်းထဲမှာရပ်နေတယ်၊ ​​ကျမတို့ကကျပန်းခေါင်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးနေတယ်။ ဤအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင်သူတို့ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်တစ်ယောက်ယောက်အားကျွန်တော်အားပြောရန်လှည့်လိုက်သည်။ ထိုအနက်ရောင်မိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်ဆီသို့လာပြီး“ ခွင့်လွတ်ပါ၊ သင့်နာမည်ဘယ်လိုလဲ?” ငါသူ့ကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်သူမနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ သူမပြောလိုက်သည့်နောက်ကျွန်ုပ်အားလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ပါ။ “ မင်းကမင်းမှာအလှဆုံးအသားအရေရှိတယ်ဆိုတာပဲငါပြောချင်တယ်။ မင်းပါးပြင်ကဒီသဘာဝပုပ်နေတဲ့အလင်းရောင်ပဲ။ ”
ငါအရမ်းအံ့အားသင့်မိတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြပါလိမ့်မယ်။ အနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနှင့်ပျော့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရသူတစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်, ဒီချီးမွမ်းငါ၏အတစ်ခုလုံးကိုအသက်တာ၏အကြီးမားဆုံးယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရန်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အရေပြားကိုအရင်ကချီးမွမ်းဖူးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီမှာအံ့သြစရာဘာမှမရှိဘူး - တကယ်တော့ငါအတော်လေးခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေရှိသည်။ ငါသည်လည်းထိုလမ်းမချဉ်းကပ်ဖူးပါ ဒီညမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကငါ့ဘဝမှာအရင်ကမရှိခဲ့ဘူး။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်သတ်မှတ်နိုင်သောအရာမှာ nofap ဖြစ်သည်။
Nofap ဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးကျန်းမာခံစားရတယ်။ ငါဟာအိပ်စက်ခြင်းပိုနည်းတယ်၊ ငါရရှိတဲ့အိပ်စက်ခြင်းကပိုပြီးနက်ရှိုင်းပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။ ငါ့အိပ်မက်တွေကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်။ ကျွန်မရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကပိုကြီးလာတယ်၊ ငါ့အသံကပိုပြီးအစွမ်းထက်တယ်။ ကျွန်တော်မလှုပ်မရှားသော်လည်းကြွက်သားလေသံသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ငါ့ကျဲပါးတဲ့မျက်နှာဆံပင်ကပိုထူလာပြီးမှောင်လာတယ်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ဓါတ်များကထိန်းချုပ်ထားခံရတော့ဘူး, ဒါပေမယ့်အစားငါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုတက်ကြွစွာထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ငါ့ယုံကြည်မှုသည် (ယခု) တစ် All- အချိန်မြင့်မားသောမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချည်ဖို့ Link ကို
08 မှာ 30 / 2012 / 10: 12 ညနေ
Challanged ငါလေဘာ porn နှင့် fapping မပါဘဲ 60 ရက်, လွန်? အဘယ်အရာကိုမျှတကယ်မယ့်:
ပထမဦးစွာကျန်းမာ relathionship မေတ္တာစိတ်ကျဆင်း
၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ၊ အချိန်ကုန်စေရုံသာမကယောက်ျားများကိုချန်ထားပါ၊ ဘဝကမ်းလှမ်းမှုတိုင်းကိုဖြုန်းတီးနေစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖတ်ရှုခြင်းက ပို၍ ကျေနပ်စရာကောင်းသည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမပြန်ပါ။
09 မှာ 01 / 2012 / 9: 50 ညနေ
ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့မနေ့ကငါ့အဘို့နှိပ်လိုက်! တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? Las နှင့်တစ်ဦးပုံပြင်
ပို့ရန် LINK - ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့မနေ့ကငါ့အဘို့နှိပ်လိုက်! တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? နောက်ဆုံးညဉ့်နှင့်တစ်ဦးပုံပြင်
ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်ကိုမမှတ်မိပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် r / NoFap သို့မကြာခဏသွားပါကကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်အစပျိုးပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အရှည်ဆုံးက ၁၈ ရက်ပါ။ အကယ်၍ မင်းကငါ့ဇာတ်လမ်းကိုသိချင်ရင်မင်းရဲ့နိဒါန်းကိုဖတ်နိုင်တယ် ဤနေရာတွင်ကျော် ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုအသေးစိတျအားဖြင့်သင်တို့ကိုထွန်းလင်းမည်မဟုတ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းများတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန် r / socialskills ကိုဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်သို့မဟုတ်လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နည်းလမ်းများမရှိသောကြောင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးမှောင်မိုက်၌ဤမျှကြာကြာထိ မိ၍ လဲပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲရှိယောက်ျားလေးသည်နောက်ဆုံးတွင်ထိုအလင်းရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
သင်သည်အဘယ်သို့ဘော်စတွန် Commons အတွက်ရွရွပြေးခြင်းနှင့်အပင်တစ်ပင်အားဖြင့်ထိုင်ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ခဲ့ကြသည်ဆိုရငျကော သငျသညျ hi လို့ပြောချင်ခဲ့ပေမယ့်သင်လိပ်ပြာခဲ့လျှင်အဘယ်သို့နည်း, သင်သည်အဘယ်သို့သောသူတို့အားလိပ်ပြာလုပ်ကြံနှင့်သူမ၏ဆီသို့လမ်းလျှောက်လျှင်? သင်သည်အဘယ်သို့သူမဖတ်နေခဲ့စာအုပ်အပေါ် commented, သူကပြုံးပြီးနှင့်သူမ၏နားကိုနောက်ကွယ်မှသူမ၏ဆံပင်တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဆိုရငျကော သင်သည်အဘယ်သို့သင်၏လက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဟုဆိုပါက "ငါသည်လမ်းခရီးအသုံးပြုပုံ _______ ပေါ့။ "? အဘယ်အရာကိုသူမရဲ့နာမည်တုန့်ပြန်နှင့်ထိုင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယျဆိုရငျကော
သငျသညျအထဲကရှာတွေ့ပါလျှင်သူမအစားစာကြည့်တိုက်အတွက်ထက်ပန်းခြံအတွင်းလေ့လာမညျ့သူအင်္ဂလိပ်အဓိကကဘာလဲ? သင်သည်အဘယ်သို့အဆင်းလှသောစနေနေ့ကလေ့လာနေအကြောင်းကိုသူမ၏ teased ဆိုရငျကော အဘယ်အရာကိုသူမရယ်နှင့်သင့်ခြေချောင်းဖိနပ်အကြောင်းသင့် teased ဆိုရငျကော သငျသညျသူမ၏ပြောသည်လျှင်သင်အမှန်တကယ် iced ကော်ဖီတစ်လတ်ဆတ်တဲ့ခွက်ကိုအဘို့အဘယ်သို့သွားရနိုင်မည်နည်း အဘယ်အရာကိုသင် join ဖို့သူမ၏ဟုမေးလျှင်, အဘယ်အရာကိုသူမဟုတ်ဟုပြောသည်ဆိုရငျကော
သင်သည်အဘယ်သို့သောက်အမိန့်များနှင့်တစ်ဦးပွင့်လင်းစားပွဲပေါ်မှာမှသူမ၏ကျောပေါ်ညင်ညင်သာသာသင်၏လက်နှင့်အတူသွားလာလျှင်? အဘယ်အရာကိုသူမဟာသနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်တူညီသောအရသာများစွာသောအသိခဲ့မယ်ဆိုရင်? သင်သည်အဘယ်သို့အချင်းချင်းလှည့်ပတ်လုံးဝသက်သာခံစားရမှစတင်လျှင်? အဘယ်အရာကိုသင်ကြိုးစားရန်အသေခံနေတဲ့သစ်တစ်ခုရေခဲမုန့်ဆိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမ၏ပြောသည်ဆိုရငျကော သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလျှင်သူမ၏စိတ်လှုပ်ရှားအဘယျသို့ရလာမယ့်ညဥ့်တလျှောက်လာရန်သူမ၏မေး အဘယ်အရာကိုသူမလက်ခံခဲ့နှငျ့သငျသူမ၏အရေအတွက်ကိုအဘို့တောင်းလျှောက်လျှင်,
သင်သည်အဘယ်သို့တက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်အတူတူတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အချိန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်? သင်သည်အဘယ်သို့ vanilla ရေခဲမုန့်ထက်တောင်ဦးအကြားမှာရှိတဲ့နမ်းဘို့အတွက်သှားလြှငျ? ဤကွီးစှာသောအရာတစ်ခုခုရဲ့အစကဘာလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်? သူမသည်မိန်းကလေးခဲ့လျှင်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ချင်ပါတယ်?
ဒါဟာ "မင်္ဂလာပါ။ " နဲ့အားလုံးစတင်ငယ်အခွင့်အလမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုရှောက်သွားဒါမှမဟုတ်သင်အမြဲတွေးမိပါလိမ့်မယ်မခံပါနဲ့ ...
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? ရင်းမြစ်: အဆိုပါ Big အဘယျသို့ဆိုလြှငျ?
အိုကေဒါသည် r / NoFap နှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ ဒါဟာငါထွက်ဖြစ်ဖို့ဒီကြီးမားသောတပ်မက်ခဲ့တနင်္လာနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘားမှာထွက်၊ ကခုန်ခြင်း၊ ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဒီတနင်္ဂနွေကိုပြန်လာဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်သောကြာနေ့ညသည် fapping ဖြင့်တီဗွီကြည့်ခြင်း၊ fapping၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ fapping၊ fapping၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြစ်သည်။ အခုတော့ fapping ရဲ့စွဲလမ်းမှုအစားငါဘာမှလုပ်ဖို့တမ်းတနေပြီ။ ငါ (ဥပမာ fap ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ) ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၆ လကအကသင်တန်းများတက်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်အပြင်ထွက်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ဂီတသံကျယ်လောင်ခြင်းနှင့်ပြည့်နေခြင်းကိုကျွန်ုပ်မကြိုက်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ "၏အတွေးအခေါ်နှင့်အတူဤဘား / Lounge ထွက်စစ်ဆေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ?"
အခုတော့ငါအရင်ကဒီနေရာကိုတစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူး၊ တီဗီ၊ အသံကျယ်လွန်းတဲ့တေးဂီတ၊ NOPE! ဒီအဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်အောက်မှာတည်ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီအမှောင်ထုလှေကားထစ်ကိုငါ ဦး စီးခဲ့တယ်။ တကယ်မှောင်မိုက်နေပြီ၊ လှေကားအောက်ခြေမှာဖယောင်းတိုင်တစ်ချောင်းသာရှိပြီးအနက်ရောင်တံခါးကိုသော့ခတ်ထားတယ်။ “ အို WTF လား။ ညနေ ၆ နာရီမှာဖွင့်သင့်တယ်မဟုတ်လား” ငါစုံတွဲတစ်တွဲအအေးနှင့်ဘားနူးညံ့နှင့်အတူ, စားသောက်ဆိုင်ဘားပြန် back ။ အောက်ထပ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုမေးတယ်။ သူကစကားဝှက်လိုချင်တယ်၊ မင်းကစကားဝှက်ထဲဝင်ဖို့လိုတယ်။ ငါတို့ဒီမြို့မှာရှိသူတွေထဲကတစ်ယောက်လား။ Pass ကိုမင်းသိလား။ အချုပ်ခန်းထဲမှာဘားရဲ့အဆုံးမှာကောင်လေးက“ စာရွက်များကြားမှာ” ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါနဲ့ငါနောက်တစ်ခါဆင်းသွားပြီးတံခါးကိုခေါက်လိုက်တယ်။ နူးညံ့သောသူသည်တံခါးကိုအနည်းငယ်အက်လိုက်သောအခါငါသူ့ကိုဖြတ်လိုက်သည်။ အချင်းလူ၊ သင်လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာထိုင်ပါ။
ငါလမ်းလျှောက်ပြီးဒီဟာကိုအလွန်အေးသော၊ အလွန်အဆင့်မြင့်သောတေးဂီတဖွင့်ခြင်းနှင့်လူများစကားပြောခြင်းတို့ဖြင့်အဆင့်မြင့်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ငါဘားကိုသွားပြီးအဲဒီမှာနေရာမချခင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအုပ်စုထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက် (အသွင်အပြင်ဌာနမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိ) ဘားဘေးနားကထိုင်ခုံတွေမှာထိုင်နေတာငါဘာသောက်နေလဲလို့မေးတယ်။ “ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဗော့ဒ်ကာ ၇” ကျွန်ုပ်သည်ရော်ဘီ (တင်ဒါ) ကကျွန်ုပ်အားကြားရန်လုံလောက်စွာကျယ်ပြောစွာပြောခဲ့သည်။ ငါသူတို့နှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်ဆက်လက်တက်တက်ငါ၏အသောက်လာပါတယ်။ ငါမိန်းကလေးအုပ်စုဘေးတွင်ထိုင်ခုံဖမ်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေး။ သူတို့ကမိန်းကလေး "bachelorette ပါတီ" တစ်ခုမှာအတူတူထွက်နေကြတယ်။ ၀ င်လာတဲ့ chatting နဲ့သေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေပါ ၀ င်ပေမယ့်သူတို့ဟာပျင်းစရာကောင်းတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပါ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းလူအများတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးအခြားအိပ်ရာပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးနှစ် ဦး ရှိသည်။ ငါ့အသွင်အပြင်ကနေဝေးဝေးထွက်သွားနေသူကိုသူသတိထားမိလိုက်ပြီးသူမနှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုပြန်ခေါ်လာသည်။ ထို့နောက်သူကကျွန်တော့်ကိုစစ်ဆေးသည်။ "ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား" ငါကောင်းပြီ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ!?"ဒါလုပ်ခဲ့တယ်?
ငါထ, ဘားမှာနောက်ထပ်သောက်заказနှင့်မိန်းကလေးနှစ် ဦး မှငါ့လမ်းပါစေ။ ငါသောက်စရာကိုစားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တယ်၊ ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးသူတို့နဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်စကားစပြောတယ်။ ငါနှစ်သန်းပေါင်းများစွာမှာဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ Comic Con (သူတို့ထဲကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသွားသည်)၊ Game of Thrones, Total Recall, REDDIT !, စကားများတဲ့စကားများနှင့်မင်းစဉ်းစားလို့မရသောအခြားအရာများအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့စဉ်ကကျွန်ုပ်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းမနှစ်ယောက်နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးကျန်သောညမှာသူတို့နှင့်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့သောအခြားစုံတွဲတစ်တွဲရှိသောကြောင့်ငါနွေးထွေးခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတညလုံးကြောက်စရာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတာနို့စို့။ WTF! ဒါတကယ်လွယ်ကူသလား တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ!? ထိုသို့ပြုသလော
TL: DR NoFap ရက် ၉၀ ကိုရောက်ဖို့ခရီးကိုသွားမယ်။ အခုတော့ငါနဲ့အတူကမ္ဘာကိုသွားမယ် တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? စိတ်ဓာတ်။ “ အကယ်၍ သူမကငါ့ကိုငြင်းပယ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း? သူတို့ကငါ့ကိုစစ်ဆေးပြီးငါ့ကိုမုန်းရင်ကော။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရူးလုပ်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သူမဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ မင်းကသူတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအအေးဆုံးသူဆိုရင်ကော မင်းပါတီပွဲရဲ့ဘဝလား။ နောက်ဆုံးညများမှသင့်ကိုသင်အရူးလုပ်မိခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝကျပန်းလူစိမ်းတစ်ယောက်၏ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုပြောပြပါရစေ။
09 မှာ 02 / 2012 / 2: 53 နံနက်
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုပဲ။ ငါဆော့ဗ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပါ။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းစိတ်ကုန်သွားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးဒီတစ်ချိန်တည်းမှာကွန်ပျူတာတွေရှေ့မှာ၊ နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဘဝကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာကတကယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ ငါဟာပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘာမှမပြောရဲဘဲနေတယ်၊ ​​ငါလဲလဲနည်းနည်းချင်းလဲလှယ်မှုတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုပူပန်မိတယ်၊ ငါအချိန်တိုင်းမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ လူတွေကိုငါဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာငါဟာအသေးအဖွဲလို့ခံစားရပြီး၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကျော်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအလေးမတက်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသောကျွန်ုပ်သည်ကြွက်သားပညာရှိသူကြီးဖြစ်သောကြောင့်
တခါတရံသူကငါ့ကိုအလွန်အမင်းရန်လိုစေလိမ့်မယ်, မကြာခဏငါအဲဒီလိုခံစားခြင်းနှင့်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းမှနုတ်ထွက်ခံရကြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ဟာလူမှုရေးအရမလိုလားအပ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားရတယ်။ အတိတ်ကအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကနေသင်ယူခဲ့ရတာကလူတွေဟာသူတို့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာကျွန်တော်မကြာခဏယုံကြည်ခဲ့တယ်။
အကယ်၍များ အရာရာတိုင်းဟာဒီဟာနဲ့နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မယ်လို့ငါပြောရင်ငါလိမ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဓိကနည်းလမ်းအတော်များများမှာတော့သူတို့ဟာအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ မလုပ်နိုင်တာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ရမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ အခုငါ့မှာဒီစွမ်းအင်ရှိနေပြီ။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေမယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုပျော်စရာကောင်းမယ့်၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အရာဒါမှမဟုတ်ယေဘူယျအားဖြင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်စေဘာသာပြန်တယ်။
လူတွေအများကြီးနဲ့အတူငါသူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံသလိုခံစားရတယ်၊ သူတို့ကိုအထူးသဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံမရရင်တောင်သူတို့ကိုငါကြည့်ရှုစေချင်တယ်။ ငါကျပန်းသူစိမ်းများနှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်ဤအဖြစ်အပျက်သေးငယ်သည့်အတွေ့အကြုံများသည်အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တုိ့အတိုင်းအတိအကျတုန့်ပြန်နေခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိလာသည်။
ငါကဖေးလိုတစ်နေရာရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါငါလာတာနဲ့အမျှငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကငါ့ကိုအကဲဖြတ်သလိုခံစားရတယ်။ အခုသူတို့သိချင်တာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရတယ်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့မလုံခြုံဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကအကဲဖြတ်ပုံရရင်သူတို့တစ်ခုခုကိုလျော်ကြေးပေးနေပုံရတယ်။
ဤအရာများသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်အမြဲသံသယဖြစ်ခဲ့ဖူးသောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် UG Krishnamurti တစ်ချိန်ကတင်လိုက်သကဲ့သို့ငါသကြားကိုသာမြင်တွေ့ခဲ့ပြီ ဖြစ်၍ ယခုငါမြည်းစမ်းနေသည်။ ငါ့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်သလိုပဲခံစားချက်တစ်ခုလုံး။
10 မှာ 21 / 2012 / 6: 55 ညနေ
ဒီနေ့ ၅၀ ကိုသွားတဲ့ခရီးကငါ့အတွက်တော်တော်တော်တယ်။ ဒီမှာငါဖတ်ခဲ့တဲ့ပို့စ်တွေအများကြီးကတခြားသူတွေအတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော်မှာဒီမှာစာအများကြီးဖတ်တယ်။ TEDx ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက် nofap ကိုစခဲ့တယ်။ ငါကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုယူနိုင်တယ်လို့ငါခံစားခဲ့ရသည့်ရက်ပေါင်းများစွာ (ရက်သတ္တပတ်များပင်) ငါ၌အပြားနှင့်အချည်းနှီးသက်သက်ရှိသည်ဟုတစ်ပါတ်ရှိခဲ့သည်, ငါတစ်ပတ်စိုးရိမ်ပူပန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ခံစားမှုရှိ အထူးသဖြင့်ကောင်းတယ်။ ခြုံကြည့်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ကဏ္ at အားလုံးတွင်အလုပ်ခွင်၌၊ လေ့လာမှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတို့တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသည်။
အရာတစ်ခုမှာ၊ ကောင်းမွန်သောအပြောင်းအလဲများသည်တဖြည်းဖြည်း (ပထမအပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်အတွင်းအပြောင်းအလဲများအလျှင်အမြန်ပြီးနောက်) ဖြစ်ပျက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေဆဲကိုတွေ့မြင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကနေ့မှာငါဟာအပြောင်းအလဲဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေတဲ့မှတ်ဥာဏ်တစ်ခုရှိတယ်။
အခြားစာဖတ်ခြင်းကိုဖတ်ခြင်းကျွန်ုပ်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကျွန်ုပ်သည်လူများနှင့်တစ်နေရာတွင်နေနိုင်ရန်အတွက်အိမ်မှထွက်ခွာရန်အတင်းဖိအားပေးလေ့ရှိကြောင်း၊ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်တစ်ခုခု ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ထိုင်ရန်ထက်သူတို့နှင့်စကားပြောစရာမလိုသော်လည်းရုတ်တရက်သတိရမိသည် စာကြည့်တိုက်ရှိလူများအနီး။ ငါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည့်ကြောက်ရွံ့မှုအဆင့်ကြောင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အမြဲမြင်ခဲ့သည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မည်သည့်နေရာမှဖြစ်ပေါ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တော်တော်များများသိသည်။ သို့သော်မျှဝေရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ဖြစ်ပြီး၊ ဘဝတွင်အရာရာတိုင်းကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ တတ်နိုင်ရင်ရှေ့ကိုလား
အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ငါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘယ်လောက်ကွဲကွာနေတယ်ဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး၊ ဘယ်လောက်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုငါထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတော့ကျွန်တော်မထွက်ခွာနိုင်သေးသော်လည်းအလွန်အမင်းလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည် (ယခု၎င်းအကြောင်းရေးသားခြင်းသည်ခံစားမှုကိုအနည်းငယ်ထူးဆန်းစေသည်)
ငါ့အဘို့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျက်ပြင်ဆင်ထားသညသို့မဟုတ် unorganized အခြေအနေများတွင်အဓိကအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတဖြည်းဖြည်းကျွန်မအပြန်အလှန်ငါနေတုန်းလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည့်အခါ, အလုပ်မှာသို့မဟုတ်ဥပမာကလပ်အခြေအနေမှာမျှပြဿနာရှိသည်, သို့သော်အခြေအနေတွင်များထဲကငါ့ကိုယူနဲ့ကျွန်မဂျယ်လီဖြစ်ကြောင်းကို🙂သို့သော်ယခုပြောင်းလဲနေပါတယ်
ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်လုံးဝနီးပါးပျောက်ကွယ်သွားမြင်ကြပြီ။ နောက်ဆုံးရဲတိုက်ကတော့လုံးဝမဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမှုစုရုံးမှုပါ။ ငါတို့ဖြတ်သန်းပြီးတာနဲ့ငါတို့အားလုံးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ငါလည်းငါ့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရင်းမြစ်တွေအကြောင်း Flashbacks တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်အားလုံးကပဟေlikeိဆန်ဆန်အတူတကွလာနေကြပြီ။ ငါ / ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ shit တွေအများကြီးရှိခဲ့တာ Fuck
ကောင်းလိုက်တာဗျ! ထိုအခါငါအတူတူပါပဲသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်မဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဒါကငါကိုယ်တိုင်ပဲ။
SA ကနေပြီးတော့ fap ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးမကူညီဘူးလို့ထင်တယ်။ အခြေအနေအချို့မှာမစုံလင်သေးရင်တောင်စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းလာတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခုအပတ်သည်ခက်ခဲသော်ငြားလည်းကျွန်ုပ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်အချို့သောထူးဆန်းသောစိုးရိမ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ အကယ်စင်စစ် flatine နှင့်ဆက်စပ်သော။ သို့သော်ဤခက်ခဲသောအခိုက်အတန့်၌ပင်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောတိုးတက်မှုကြီးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
မနေ့ညကကလပ်အသင်းတစ်ခုမှာနေခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါ့အပြင် flatline ရောဂါလက္ခဏာတွေကဒီမှာရှိနေတာငါအပတ်အနည်းငယ်လောက်ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တောင်ငါဒီမှာရှိနေဖို့စိတ်မပူခဲ့ဘူး၊ ဒါကကောင်းတဲ့ပါတီတစ်ခုလိုမျိုးပဲ။
ဒီတော့ငါ PMO မှာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့တွေ့နေကျ SA ကိုရင်ဆိုင်နေရသူတွေအတွက်ပါ။ မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီးသင်၏ဘ ၀ ၏အခြားဒေသများတွင်တိုးတက်မှုများကိုဖုံးကွယ်မထားသင့်ပါ။
ps: ငါ့အ english များအတွက် sry
NoFap ကငါ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီ။ ၆ လကြာဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုမကြာခင်မှာတင်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်မိအောင်လုပ်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်မှာလည်းရှိပါသေးတယ်။ အတိတ်ကလူတွေလမ်းလျှောက်ထွက်လာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခံစားရတယ် (မျက်လုံးကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရတာ)၊ စကားပြောဖို့အရမ်းနည်းနေသေးတယ်၊ ငါ "ဟေ့နေကောင်းလား" လို့ပြောရင်ပြုံးရုံလေးပဲပြောချင်တယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင်၌ရှိနေတဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အလားအလာအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်၊ မသေတဲ့ SOB လိုတိုက်ခိုက်ပါ။
10 မှာ 21 / 2012 / 7: 15 ညနေ
ငါနေရာတစ်နေရာမှာရှိနေတုန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာငါ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဘားတန်းကိုတက်လာတဲ့အခါဂီတသမားတွေအတွက်စားပွဲခုံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ သူမသည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူမကိုကြည့်ပြီးသူမကြည့်လိုက်သည်။ အများအားဖြင့်တော့ဒီဟာကငါရှက်တတ်သွားပြီးဝေးဝေးရှောင်ထွက်သွားတဲ့နေရာပဲ။ အဲဒီအစားသူမမျက်လုံးကိုသူကြည့်လိုက်ပြီးပြုံးလိုက်ပြီးသူမပြန်ပြုံးလိုက်တယ်။ တိုတိုပြောရရင် ၃ ပေကျော်မသွားဘဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နံပါတ်ကိုရလိုက်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိတယ်လို့တချို့လူတွေအကြောင်းဖတ်ဖူးတယ်။ ပြီးတော့ nofap ကိုစပြီးရင်မိန်းမတွေကမင်းကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ နင့်ကိုငါသံသယ ၀ င်မိတယ်၊ nofap ကကျွန်မရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီ။
10 မှာ 25 / 2012 / 7: 24 ညနေ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမှ“ သည်းခံစိတ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း” သည် abstinence (သို့မဟုတ်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အပြင်ယုံကြည်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၅၆ ရက်ကြာလိင်မှုကိစ္စနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ပြီးအောင်မြင်စွာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မူလရည်မှန်းချက်မှာရက်ပေါင်း ၆၀ ဖြစ်သော်လည်း ၅၆ ရက်တွင်အပျိုစင်အမျိုးသမီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်ဖျက်ခြင်းခံရပြီးကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီမတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ“ fucked / estre” porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင်ဆက်ဆံရေးမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ပို. အရေးကြီးသည်ငါ့အဘို့ရလဒ်အဖြစ်သညျထသောတိုးမြှင့်စွမ်းအင်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့အလုပ်ငါ့အထောက်အထားများနှင့်အသိပညာကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့အချိန်ပြည့်အနေအထားမှနိမ့်ဆုံးလုပ်ခတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အလုပ်ကနေသွား၏။ ဤသူကားငါ၏ဘဝ (လှုံ့ဆျောမှု, အကျင့်စာရိတ္တ, Self-လေးစားမှု, အများပြည်သူစကားပြော, etc) အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်တစ်အကြီးအကျယ်ခုန်လိုအပ်သောနဲ့ကျွန်မအပြည့်အဝအကြှနျုပျ၏မညစ်ညမ်းခရီးငါ့ကိုငါအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏အလိုတော်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကွေးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်ကိုသင်ပြီးမြောက်နိုင်ဘူးအနည်းငယ်သာရှိသေး၏။
ပို့ရန် LINK - https://web.archive.org/web/20160311040833/http://boards.420chan.org/qq/res/349130.php
12 မှာ 15 / 2012 / 8: 45 ညနေ
ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းမှငါ့မိတ်ဆွေအားလုံးနှင့်အတူထိတွေ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီ။ ဒါကြောင့်အတိတ်ကာလ6နှစ်ပေါင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏တနင်္ဂနွေကိုငါ့ mom, နှင့်သို့မဟုတ်အစ်မ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့သောဘတ်စကက်ဘောကစားပွဲကိုကြည့်, အချို့ဗီဒီယိုဂိမ်း / ဖဲချပ်နှင့်အတူညစာစားခြင်း၏ပါဝငျခဲ့ကြပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်မသင်တန်း၏ညစ်ညမ်းမှ FAP လိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ဘဝတွင် PMO မလုပ်ခြင်းနှင့် PMO ၏ပထမဆုံးစနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး…အတိတ်တုန်းကဘားတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကလပ်တစ်ခုကိုတစ်ယောက်တည်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယ်မောပြီး“ အလွန်မိုက်မဲတဲ့လမ်းလည်းမရှိ၊
ဒီတစ်ခါတော့ငါထပ်တူအတွေးရှိခဲ့ရင် F ** K IT လို့ပြောပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ငါဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး၊ fap မလုပ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့ဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်…ဒါကြောင့်ငါထွက်သွားခဲ့တယ်၊ ဘားတစ်ခုတည်းမှာညစာစားခဲ့တယ်၊ ငါကျပန်းပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးများနှင့်၎င်းတို့အားလမ်းညွှန်မှုနှင့် shit တောင်းခံခြင်းများနှင့်စကားပြောခဲ့သည် (obv သည်ငါနှင့်စကားပြောချင်သောလမ်းညွှန်များကိုသာဂရုမစိုက်နိုင်) ။
မိန်းကလေးတစ်ဦးအထဲကမေးရန်ပေမယ့်အတော်လေးအနည်းငယ်စကားပြောခဲ့ဘူးသတ္တိတက်ရေတွက်ဘယ်တော့မှမ။ ငါအတိတ်၌ပြစ်မှားမိဖူးဘူးတစ်ခုခု။ တောင်မှငါဥပမာတစ်ခုကောက်ဗီဒီယိုထဲမှာကိုမြင်လျှင်အချို့လိုင်းများကြိုးစားခဲ့: သင်သည်သင်၏လိင်အင်္ဂါအမည်တစ်ခုရှိဘူးသငျသညျကြိုက်တယ်တချို့ကောင်လေးသေးငယ်တဲ့လိင်တံခဲ့လျှင်, သင်ဘာလုပ်မလဲ ငါသည်လည်းစုံတွဲတစ်တွဲမိန်းကလေးငယ်များကိုငါတယောက်တည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မညာဘက်ချွတ် jerking အိမ်မှာဖြစ်ခြင်းထက်၎င်း၏ပိုကောင်းပြောခဲ့တက် striaght ပြောသည်? ဖြစ်နိုင်မပေးအကြောင်းပြောဆိုရန်အကောင်းဆုံးအမှုအရာပေမယ့်ကိုယ့်ကိုမေ့သွားရောတဲ့က F ** K သည်ပေးပါ။
ကျွန်တော်ဒီညလူသစ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူတယ် ငါကျိန်းသေ fapping အစားပိုပြီးမကြာခဏဒီလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးအချို့ကိုထွက်မေးရန်ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုအလုံအလောက်ရရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့အရာတွေထဲကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါမှန်းထားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးပါပဲ။
တဖန်ငါဒီညထွက်မသွားမယ့်နေပါတယ်။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်ဤအချိန်ပုံမှန်ပြုမူလိမ့်မယ်ကတိပေး။ ငါ့ကိုကံဆန္ဒရှိ!
12 မှာ 17 / 2012 / 8: 41 ညနေ
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် fapping အကြားဆက်သွယ်မှုကို
POST LINK - လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် fapping ကြားဆက်သွယ်မှု
ငါ PMO စွဲလမ်းမှုကိုအကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်အဆုံးသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုကိုကုသခြင်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် fapping နဲ့ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြားဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှမသိခဲ့ပါဘူး။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူကန်လန်လူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ငါနှင့်အတူအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာပုန်းနေပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်မှာ abstinence ပြီးနောက် nofappers များရဲ့ယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောရေးသားချက်များကိုကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည်။
ဒီတနင်္ဂနွေငါနှင်းလျှောစီးသွားလေ၏။ ဝေဟင်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတုန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ ဆင်ခြေလျှောကိုနှင်းလျှောစီးနေချိန်မှာသူမရပ်တန့်သွားတာကိုသူမတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမအနားနားမှာရပ်ပြီးဟိုင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူမရဲ့နာမည်ကိုမေးပြီး ၅ မိနစ်လောက်စကားပြောခဲ့တယ်။ တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျပန်းမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရယ်စရာကောင်းတာကငါလုံးဝစိတ်မပူခဲ့ဘူး၊ စကားစမြည်ပြောတာဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတောင်မှမရှိခဲ့ဘူး၊ ပါးနပ်စွာပြောရန်ပြောလိုက်သည့်စကားလုံးကိုငါမရိပ်မိခဲ့ဘူး။ ငါဘာပဲဖိအား, အဆင်မပြေမရှိခံစားရတယ်။ ငါဖြစ်ပျက်ရုံကိုမယုံနိုင်သေးပဲ။ ဒါဟာတကယ်စူပါပါဝါနဲ့တူခံစားမိခဲ့ပေ။ ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်အားကြီးမားမှုတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုငါကြောက်တယ်။ 🙂
ငါသေချာသိသောအရာတစ်ခုမှာငါ PMO ကိုသွားတိုင်း ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်မည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောနိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျိန်စာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါအမြဲတမ်းအရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါဟာတကယ်ကို shit လိုလုပ်နေတာပဲ။ ဒါကြောင့်ငါ့အမှု၌တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်သည် PMO နှင့်အလွန်လူမှုဆက်ဆံရေးဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော်ဟုတ်ကဲ့အချိန်နှင့်ရှောင်ကြဉ်သည့်လူမှုရေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်တိုးတက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူပေါ်သွား !!! မင်းကောင်းတာပေါ့ ငါ့အဆွေခင်ပွန်းအားကြီးသောတိုက်ခြင်း။
မင်းရဲ့ post ကိုဖတ်တဲ့အချိန်အထိငါယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးလာတာဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေလည်းအဲဒီလိုခံစားနေရပုံရတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ် ပြီးတော့ ၂/၃ ရက်ပဲကြာတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီနေရာကိုလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်သေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံစားမိတိုင်းအချိန်တိုင်းသူကအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးဖြိုဖျက်ပစ်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နှစ်ပေါင်း PMO ဖို့အသုံးပြုတယ်ကတည်းကကကပ်ရန်ခဲယဉ်း .. သင်အမှန်တကယ်သင်၌ရှိကြ၏တူညီသောအနေအထားပြန်ကျသွားဖို့လိုသလား? PMO ကသင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းကိုလျှော့ချပေးတယ်၊ သင်နောက်ထပ် ၂ ရက် (၇ ရက်လုံးလုံး) သန်မာနေမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏဟာအရူးလိုတိုးပွားလာပြီးအဲဒါက“ စူပါပါဝါ” ကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုအထိတိုးပွားစေလိမ့်မယ်။
၂ ပတ်ကျော်အတွင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ နှစ်ရက်အကြာမှာငါဟာလူတွေနဲ့ပိုပြီးစကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အခုမတိုင်မီပြန်သွားပြီလို့ထင်ရပေမယ့်ငါကြားသိရတဲ့အတိုင်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါမျှော်လင့်တယ်၊ ပြန်လာသည်!
ဟုတ်တယ်၊ တကယ်တော့ပိုကောင်းလာတယ်။ အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ငါသာမန်စိုးရိမ်စိတ်ရှိခဲ့ရင်မင်းအများစုထဲကဒီမှာငါပြောနေတာကိုယုံတယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မမှာပုံမှန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းကိုတကယ်လွယ်ကူဖို့လိုတယ်။ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသင်အခုလုပ်ခဲ့သလိုပါပဲ။
ငါအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါဟာအဖွဲ့အစည်းများစွာရဲ့ဥက္ကPresident္ဌ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္inမှာပါ ၀ င်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာကောလိပ်တက်ပြီးနောက်မှာတော့ငါဟာလူမှုရေးအရအလွန်စိတ် ၀ င်စားလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီ၊
ငါမင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုယူပြီး PMO-ing ကိုရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်။
ငါနေ့ ၆၀ တွင်တစ်စုံတစ်ခုနှင့်ရွှေရောင်ရွှေဝါရောင်ခံစားခဲ့ရသည်။ ကြက်များနှင့်စကားပြောခဲ့ကြရုံမဆိုဖိအားမရှိဘဲယေဘုယျအားဖြင့် ppl ရုံရယ်စရာရှိခြင်းနှင့်ပြက်လုံးများ cracking ခဲ့။ ဘဝကိုအလေးအနက်မထားပါနှင့် - စီးရုံမျှသာ (အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးသောအကောင်းဆုံး fuck ဆိုတဲ့စီးနင်းမှု!) 🙂
01 မှာ 16 / 2013 / 1: 16 နံနက်
မည်သည့်လူကန်လန် NoFap ကနေအကျိုးခံစားခွင့်အပေါ်အလင်းကိုသွန်းနိုင်သလား? ဘယျအခြိနျမှာသင်သည်သင်၏လူမှုရေးအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တာလဲ
ကောင်းပြီ၊ fap မရှိသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများကို (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်) ပိုမိုပစ္စုပ္ပန်တွင်ရှိနေခြင်း၊ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တာဝန်ခံယူရန်ဖိအားပေးခံရခြင်းတို့ပါဝင်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီး ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်ကြားမှာ PMO (MOO) လုပ်လေ့ရှိပြီးတစ်ခါတလေမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်တတ်သူပါ။ (၎င်းသည်အများအားဖြင့်အနှေးနှင့်အမြန်ပြန်ဖြစ်ရန်) ။ ဒီတော့ငါ့ရဲ့ကိစ္စမှာလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူအချက်အလက်အချို့။
-My သွားပိုမြန်ပြီးပိုယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်, အများပြည်သူသောနေရာများအတွက်ကွောကျ၏ခံစားချက်လျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်ခြေ။
- ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရသည်။ အတန်းဖော်များနှင့်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေမှုများကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်မဟုတ်တော့ပါ။ ယခု nofap မတိုင်မီကျွန်ုပ်တွေးမိသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ , ဒါပေမယ့်နောက်မှအရာအားလုံးချောမွေ့လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီ။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကပိုမိုပြည့်ဝသည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ်မခံစားရတော့ပါ။ သင်အလွန်ကောင်းသောစိတ်နေစိတ်ထားနှင့်အရာအားလုံးစီးဆင်းနေသည့်အချိန်၊ သင်နေ့၊ ည၊ ၎င်း၏ပြည့်စုံ? သင်နှင့်သင်နှင့်အတူရှိနေသူများအတွက်ပျော်စရာဖန်တီးနေပါသလား။ Nofap ကဒီကိုလွယ်ကူစေတယ်၊ ​​စောင့်ပါ၊ ငါဒီဟာ Normal and natural thing လို့စဉ်းစားမိတယ်။
အမျိုးသမီးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ - ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုပိုမိုသတိပြုမိပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်ပုံရသည်။ ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင် ပို၍ ကျန်းမာလာပြီး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဲလွန်စနှင့်ပိုမိုအာရုံစိုက်လာစေရန်ထူးဆန်းသောအရာများပြောဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျော့နည်းစေသည်။ သူတို့နဲ့စကားပြောတာကပိုလွယ်တယ်၊
အများကြီးတဖန်ငါ့မိသားစုများ၏ကုမ္ပဏီခံစားခြင်း: သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုအသိအမှတ်ပြုထား။ သူတို့ကို Complimenting ။ တစ်ဦးစာရေးထမင်းစားခန်းစားပွဲပေါ်မှာ more.In ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လိမ္မာပျော်မွေ့နေချိန်မှာအမှုအရာတွေအများကြီးအကြောင်းကိုငါ့အစ်ကိုနှင့်အတူစကားစမြည်ရှိခြင်း။
- ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တာဝန်ခံမှု - ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအရယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် ပို၍ တူသည်။ ငါကလူတွေကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ငါလက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်၊ မေးခွန်းတွေမေးတယ်၊ အရာဝတ္ထုတွေကိုပြင်တယ်၊ ငါလိုအပ်ရင်လူတွေကိုပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။ ငါလမ်းညွှန်ပေးတယ်၊ သူတစ်ပါးကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်၊ ငါကပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နွေးထွေးတယ်၊ လူတွေသတိထားမိပြီးငါကြိုက်တယ်။
၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ အရာရာတိုင်းတွင်၎င်း၏အရိပ်များရှိသည်ကိုသတိရပါ။ တချို့ကရက်ပေါင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏, အခြားသူများကိုသိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးဆောင်မှုနှင့်ခက်ခဲသောရက်များလည်းရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်ပါကသင်သည် ၁၀ ရက်ဝန်းကျင်၌စ တင်၍ နေ့ ၂၀-၂၂ တွင်စွမ်းအင်များစွာဖြင့်အသစ်အဆန်းခံစားရလိမ့်မည်။
အခု၊ မင်းကမင်းရဲ့လက်ရှိစလှည့်ကိုစလိုက်ပြီ၊ မင်းဟာအသစ်ဖြစ်မယ်၊ သင်သည်သင်၏ချစ်လှစွာသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာ၊ ဤအသစ်သောအရာအတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအရောင်းအဝယ်ပြုနေပြီးသင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုချက်ချင်းရယူလိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားလိုသည်။ သငျသညျမေးအဘယ်ကြောင့်သိသာထင်ရှားတဲ့, ထိုပါပဲ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားက ၂ ပတ်လောက်သွားပြီး“ ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်” ဖို့သွေးဆောင်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာငါပြောပြမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကလိုငါရောက်နေတယ်။ ငါသံသယကနေယုံကြည်သူ -Wannabe မှ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအကျိုးကျေးဇူးများကြုံတွေ့ရန်သွား၏။ ထိုအခါငါလုံးဝယုံကြည်တယ်, ငါအတော်လေးဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်အကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်ပြောပြ။ ယနေ့ခေတ်တွင် nofap လုပ်ခြင်း၏အဆင်ပြေမှုကိုတွေ့မြင်ရုံသာမကဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် PMO သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအရာများ၊ လူသားအငယ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းသို့ ဦး တည်သည်ဟူသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ အကြှနျုပျ၏တံဆိပ်က6ရက်ကြာပြီးနှစ်လနှင့်ခြောက်လအတွင်းတွင် ၁၀၀ ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သိသည်။
ငါပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကမင်းဟာဒီ nofap ကိစ္စကိုမင်းသိပ်ပြီးမယုံကြည်သေးဘူးလို့ငါသံသယရှိတယ်။ သငျသညျတွန်းအားများနှင့်အတူရုန်းကန်နှင့်ဖြစ်ကောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကမင်းဟာသင်ထဲထဲဝင်ဖို့၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်ကိုနားထောင်ပေးပါ: nofap တွေးခေါ်မှုအပေါ်ကျွေးမွေးပါ။ သင်ကမစွန့်ခွာနိုင်တော့သည့်ရုန်းကန်မှုနည်းပါးပြီးအမှန်တရားပိုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင့်စိတ်ကသင့်အားဘာပြောမည်ကိုဂရုပြုပါ။ ၎င်းကိုစဉ်းစားပါ၊ ၎င်းသည်သင့်ထံအလိုအလျောက်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ဂုဏ်ယူပြီးစီးနင်းလိုက်ပါ။ သင့်ခရီးစတင်ပါပြီ
ဒါနဲ့ဤ reply မှစတင်နှင့်ရှည်လျားသောအစီရင်ခံစာသို့လှည့်:
ကျွန်မအကြောင်းကို5ရက်ပေါင်းမှာကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့မြင်စတင်
နေ့စဉ် ၁-၂ ကြိမ်ကနေ nofap ကိုသွားပြီး ၂ ပတ်အကြာမှာလူမှုရေးအခြေအနေအပေါ်ယုံကြည်မှုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါစကားလက်ဆုံမကိုင်နိုင်ခြင်းကနေလမ်းပြအဖြစ်အလုပ်လုပ်မှသွား၏။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအဓိကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ခဲ့ပြီး nofap နှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုကျွန်တော်မထင်ပါ။
Edit ကို: ငါပဲ့ထိန်းလူများအများဆုံးငါ၏အအသက်အရွယ်န်းကျင်ငယ်ရွယ်ဆွဲဆောင်မှုကလူဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပါ။ ဒါဟာငါ့အဘို့ကြီးတွေခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
04 မှာ 23 / 2013 / 1: 19 နံနက်
NoFap သူ၏ 17th နေ့၌ဟောင်းတစ်ဦးက 17 တစ်နှစ်
ကျွန်မပထမဦးဆုံးငါ၏အခငျြးကို fapstronauts ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပြောရှိသည်! ငါသည်သင်တို့နှင့်ဤကြောက်မက်ဘွယ် Sub-reddit မရှိဘဲဤဝေးကရာ၌ခန့်ထားပြီနိုင်ဘူး။ ငါထွက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြ wow ဟုပယ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါ 13 နှစ်အရွယ်မှာ masturbating စတင်ပြန်ကြည့်ဘူး။ ငါသည်အတိတ်4နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့ fapped ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမေတ္တာ, သည်းခံခြင်း, ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏တစ်ဖွဲ့လုံးကွပ်မျက် feeling ငါ့ကိုလုယက်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကျော် NoFap ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အိပ်မက်မက်နေသောမိန်းကလေးနှင့်နှစ်ကြိမ်ကော်ဖီသောက်ခဲ့ပြီးသူမနှင့်ထပ်မံတွဲဖက်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ဟုထင်ရသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် fapping ကိုသုံးသောအပျိုစင်မဟုတ်သည့်အနမ်းအတွက်သူသည်များစွာရှိသည်။ ယခုတွင်ငါသည်လွယ်ကူစွာမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးအထွေထွေအမျိုးသမီးများနှင့်စွဲလမ်းနေသည်။ ငါလုပ်ချင်တာကမိန်းကလေးတွေပဲ။ ဒါကငါ့အတွက်အသစ်ပဲ။ ငါဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူရမယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာ SO တစ်ခုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာနဲ့ဆက်စပ်မှုတစ်ခုလုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်။ ငါ (၃၁) ပေါင်ကျသွားပြီးဝက်ခြံပျောက်သွားတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အထင်ကြီးစေရန်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှစ်ဆလောက်ရှိသည်။ ငါပြောရန်ကြိုးစားနေသည်ကထိုက်တန်သည်။ NoFap ကကျွန်တော့်ကိုနေစရာအကြောင်းတစ်ခုပေးပြီး ၁၇ ရက်သာပေါ့။ တနည်းကား၊ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်၍ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
TL; DR: နှစ်ပတ်အတွင်းခုနှစ်တွင် NoFap ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ငါ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ပေး၏သိရသည်။
04 မှာ 23 / 2013 / 2: 41 ညနေ
ပြည်သူ့ pornogra ရှောင်ပြီးနောက်ပိုပြီးအသက်တာကိုတန်ဖိုးထားကြသည်
လူတွေကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားလာကြတယ်။ သူတို့ဟာအလားအလာရှိတဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပရောပရည်လုပ်နေတာ၊ ဘဝမှာအရာရာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံရတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးတယ်၊ အမှုအရာကလူအများစုကဒီဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ဆိုးလို့မရဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်
ငါလွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်းတောင်မရနိုင်ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားသည်။ ထို့နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် ၃ ပတ်ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ အကျိုးကျေးဇူးများသည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ ပထမအပတ်မှာငါဘာမှသတိမထားမိ၊ ဒုတိယအပတ်ငါပင်ပိုဆိုးခံစားရတယ်, ဒီပြားချပ်ချပ်လိုင်းဇာတ်စင်ဟုခေါ်သည်။ တတိယပတ်မှာအပြောင်းအလဲတချို့ကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့တယ်။ ငါလူတွေကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီးစကားပြောနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မိုးတိမ်နက်ကငါ့ ဦး နှောက်ကထွက်သွားသလိုပဲ။ ငါတကယ်လတ်ဆတ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့အောင်မြင်ဖို့အများကြီးပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုခံခဲ့ရတယ်။ ငါကအားကစားခန်းမထဲမှာသတ်ပစ်တာ၊ မိန်းကလေးတွေကကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတာ။ ရယ်စရာကောင်းတာကဂီတဟာ ၁၀ ဆပိုကောင်းတယ်။ ငါခံစားခဲ့ရတဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်က ၉၀% သွားပြီ။
အကယ်၍ သင်သည်ယခင်ကလူမှုရေးအရတကယ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဤပြyourနာသည် ၉၈% သေချာသည်။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့စမ်းကြည့်တာလဲ။ ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အခက်ခဲဆုံးအခက်အခဲဖြစ်သော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကြိုးပမ်းမှုကိုအဆ ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ရာပေါင်းများစွာသောအခြားလူများအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမသုံးမီသင်အမှန်တကယ်လူမှုရေးမဟုတ်သော်ငြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒများများပြားလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
05 မှာ 31 / 2013 / 5: 56 ညနေ
ဒီနေ့ဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့လုံးထိုင်နေမယ်။ ဒါပေမယ့်အစား၊ တောထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါဂျြောဂြီယနျဘေ့စ်ဘောကွင်းအနီးပြန်လမ်းလျှောက်နေစဉ်, ဒီယောက်ျားတွေဘေ့စ်ဘောကစားနေသည်ကိုငါမြင်၏။ ငါဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါယောက်ျားတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကစားချင်သလားလို့မေးတယ်။ fapping အချိန်ကာလအတွင်းငါ့ကိုအဟောင်းလည်းစိတ်ပျက်စရာနှင့်လူမှုရေးလက်ခံရန်လက်ခံရန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် NoFap အသစ်မှာကျွန်မမှာစွမ်းအင်ရောယုံကြည်မှုပါရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါက "အင်း!" ကျနော်တို့ဘေ့စ်ဘောနှင့်ဘောလုံးကစားတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါတို့ဘီယာတစ်ခွက်မျှစားပြီးပြုံးပြကြတယ်။ ဒီလူတွေဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတာလဲ၊ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
06 မှာ 28 / 2013 / 12: 36 နံနက်
လူမှုစိုးရိမ်စိတ်အမှန်တကယ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကဖယ်ရှားပစ်ရသည့်အတွက်သုတေသနပြုနည်းလမ်းတွေကနှင့်အတူသူတို့အဘို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ပြန်ဖွင့်ကျိန်းသေငါ၏အစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်ဆင့်ကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်ပင်ပဲ (အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး) သူစိမ်းပြောပြရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းအကျပ်ငါခိုလှုံရာမှကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကလူငါဆိုသည်ကားခဲ့သောအရာကိုကိုနားထောင်အတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်လာတယ်။